shwezinu: August 2009
NC TECH Computer Service & Networking
ကိုငြိမ်းချမ်း (IT Consultant)
B.Sc. (Maths), NCC IDCS, MCITP
ကွန်ပျူတာများအား Anti-Virus Software များ Virus Definition Update များ အိမ်တိုင်ယာရောက် လာရောက်ထည့်သွင်းပေးခြင်း။
ကွန်ပျူတာ ပြဿနာများကို အိမ်တိုင်ယာရောက် လာရောက်ဖြေရှင်းပေးခြင်း။
ကွန်ပျူတာများ တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး ချိတ်ဆက်၍ Fileများ၊ Printerများ Share လုပ်၍ အသုံးပြုလိုလျှင် Network ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း။
ကွန်ပျူတာများအား အလွန်သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းပေးခြင်း။
Network Game Centre များ၊ CyberCafe များကို အထူးနှုန်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ Cyber Cafe များတွင် Proxy Server၊ Cache Server၊ Cafe Server များ
လူကြီးမင်းများ ကွန်ပျူတာဝယ်ယူလိုလျှင် မိမိလုပ်ငန်းနှင့်လိုက်ဖက်သော Model၊ အမျိုးအစားစသည်တို့ကို မမှားအောင်လိုက်လံဝယ်ယူတပ်ဆင်ပေးခြင်း၊
Network Game Centre များ Internet Cafe များဖွင့်လိုလျှင် အစအဆုံး လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။
Address: ၁၃၂၊ ၇၂လမ်း၊ ၃၃-၃၄လမ်းကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊ မန္တလေး။
ဖုန်း၊ ၀၉-၂၀၄၄၃၅၆၊ ၀၂-၇၃၅၂၂
Subpages (1): Networking
attractions-great-wall.jpg 69k - on Jun 27, 2009 8:07 PM by ငြိမ်း ချမ်း (version 1)
edited by ငြိမ်း ချမ်း
attachment from ငြိမ်း ချမ်း
edited by nyeinchan28
Posted by SHWE ZIN U at 4:25 AM 25 comments Links to this post
Burma Related Sites: BOOK:
Business: Campaign Groups:
Ethnic Groups: Entertainment (Music)
Media Groups: News&Media(Exile):
News&Media(Inside): Political Group:
Personnel Pages: Photo:
Right Groups: Sport:
Posted by SHWE ZIN U at 1:27 AM 10 comments Links to this post
ခရီးသည်၏ လွင့်မျောခြင်း http://luula18.blogspot.com
စည်းလုံးခြင်းရဲ့  အင်အား http://photayokeking.blogspot.com
Art is Art http://yewintthu.blogspot.com/
ဆုံဆည်းရာ - http://www.soneseayar.blogspot.com/
Golden Colour Revolution http://komoethee.blogspot.com/
သမိုင်းထဲက ရက်စွဲများ http://weunite-weblog.blogspot.com/
Posted by SHWE ZIN U at 12:50 AM 12 comments Links to this post
SS Public Internet Access, See Sein (DTP and Copy)
SS Public Internet Access
See Sein Computer and Copy
စည်းစိမ် ကွန်ပျူတာ စာစီစာရိုက် နှင့် မိတ္တူ
a great saving of time & money
အခန်းနံပါတ် D1/D2 ၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်ပန်းခြံတိုက်ခန်း
ဗောဓိကုန်း ဘုရား အနောက်ပေါက်၊ မန္တလေး တက္ကသိုလ် အနီး၊ မန္တလေးမြို့
ဖုန်း 09-2013072 ၊ 09-91001074
Posted by SHWE ZIN U at 12:01 PM2comments Links to this post
ငယ်ဘ၀များ (၆) နှင့်မေမေပြောသောပုံပြင်များ
ကျနော်မေမေက ပုံပြောလည်းကောင်းတယ်၊ စာတွေလည်းဖတ်တယ်၊ ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေကို ပြန်ပြော ရတာလည်း ၀ါသနာပါတယ်။ ကျနော်က ပုံလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ တကယ် ပုံပြင် မဟုတ်ပါဘူး၊ မေမေတို့ ငယ်ငယ်က အကြောင်းတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်အကြောင်းတွေကို ပြန်ပြောပြတဲ့ အခါ နားထောင်လို့ အရမ်းကောင်းပြီး ကျနော်တို့ ခေတ်နဲ့ အလှမ်းကွာနေတော့ ကျနော်စိတ်ထဲမှာ ပုံပြင်လို့ ထင်လို့ ပုံပြင် လို့ ပြောလိုက်တာပါ။
မေမေကြိုက်တာတွေက စုံထောက်ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ထူးထူးဆန်းဆန်း အဖြစ်အပျက် တွေကို ပိုကြိုက်တယ်၊ စာဖတ်တဲ့ အခါလည်း မ၀င်းမြင့်တို့၊ ဆွေလှိုင်ဦး၊ မောင်သိန်းဆိုင် တို့ကို အဖတ်များတယ်၊ ဘာသာပြန် ဆိုလည်း God Father လို စာအုပ်မျိုးကိုပိုကြိုက်တယ်။ God Father ဆိုရင်ဖေဖေ ရဲ့ အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်ပေါ့၊ ဖေဖေ စိတ်ကြည် နေရင် မေမေပြောပြော ပြနေတာကြားတယ်။
ကျနော်တို့ မောင်လေးညီမလေးတွေ နဲ့ အရပ်ထဲက ကလေးတွေကိုတော့ ဆွေလှိုင်ဦး ၀ထ္ထု တို့ မ၀င်းမြင့် ၀ထ္ထု တို့ကို အမြဲတန်းပြောပြောပြနေတာ ကလေးတွေဆို မေမေနားမှာ ၀ိုင်းနေတာဘဲ၊ ဆွေလှိုင်ဦး ရဲ့ ဂျက်မ ၀ထ္ထုတုံးက ဆိုရင် ကလေးတွေက ကြိုက်လွန်းလို့ မေမေ ကိုလဘက်ရည်ဝယ်ပေးကြ၊ အလုပ်တွေ ၀ိုင်းလုပ် ပေးကြနဲ့ အန်တီမော် ပြောပါတော့ ပြောပါတော့နဲ့၊ မေမေလည်း တပတ်လောက် ပြောပြ လိုက်ရ တယ် ထင်တယ်။
မေမေ ကျနော်တို့ကိုပြောပြတဲ့ ပုံပြင်တွေထဲမှာ ကျနော်အကြိုက်ဆုံးက ကျနော်ကို မန္တလေး က service quarter မှာမွေးပြီးတော့ ဘဘကြီးက မော်လိုက်ကို ပြောင်းရတဲ့အချိန်မှာ မေမေရဲ့ မော်လိုက်အတွေ့ အကြုံ့တွေဘဲ၊ ၁၉၆၂ မတ်လလောက်မှာပေါ့ (ဖေဖေ ရှိနေလို့ သေချာမေးလိုက်တယ်)၊ အဲဒီမှာ မေမေ ရယ် ကျနော်ရယ် ဘဘကြီးနဲ့ မေမေကြီး ရယ် မော်လိုက် ကိုလိုက်သွားရတယ်၊ ဖေဖေတို့ကတော့ မန်းတလေး တက္ကသိုလ် မှာ ကျောင်းတက်နေရတာဆိုတော့ ကျောင်းပိတ်မှ မော်လိုက်ကိုပြန်လာတာပေါ့၊ မေမေ က မော်လိုက် အသွား သဘောင်္ပေါ် အတွေ့အကြုံ့ ကစပြီးတော့ ပြောပြတယ်။
မော်လိုက်မှာ ကျနော်တို့နေရတဲ့ အိမ်ကြီးက အင်္ဂလိပ်ခေတ်က အင်္ဂလိပ် အရာရှိတွေနေတဲ့ အိမ်ကြီး တွေဆိုတော့ အကြီးကြီး တွေပေါ့၊ အဲဒီအချိန်မှာ မော်လိုက်မြို့က အရမ်းခေါင်တယ်၊ တောနဲ့လည်း အရမ်း နီးတော့ ကျားတွေဘာတွေ အိမ်ဝန်းထဲထိ ၀င်တယ်ပြောတယ်၊ ရဲသားတွေ နေတဲ့ ရဲတန်းလျားက လည်း အဲဒီအိမ်ကြီးနားမှာ ဘဲရှိတယ်တဲ့။
အဲဒီ ရဲတန်းလျားမှာ စုန်းမ၂ယောက်လောက်လည်း ရှိတယ် ပြောတယ်၊ အဲဒီထဲက စုန်းမတယောက်က သူနဲ့ ကပ်ရက်အခန်းက အမဲခြောက်လှမ်းထားတာကို ဒီဘက်အခန်း ကနေပြီးတော့ စုန်းပညာနဲ့ လှမ်းယူ တယ်ပေါ့၊ လူမယူဘဲ နဲ့ အမဲခြောက်အတန်းကြီးက သူ့အလိုလို ရွေ့နေတာ အမဲခြောက်ပိုင်ရှင်က မြင်တော့ ရန်ဖြစ်ကြတာပေါ့၊ အဲဒီမှာ ဘဘကြီး ကိုလာတိုင် ကြတော့ ဘဘကြီး ကသေနပ်နဲ့ လိုက်သွား ပြီး စုန်းမတွေ ဘာတွေ နားမလည်ဘူး မကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ အပြစ်ပေးမှာဘဲ ဆိုမှ အဲဒီ စုန်းမ က အဲဒီလိုမျိုး လုပ်တာတွေ ငြိမ်သွားတယ်လို့ ပြောတယ်၊ နောက်ပြီး လပြည့်လကွယ်တွေမှာ စုန်းတောက်တာ တွေကို လည်း မေမေတို့ အမြဲတန်းမြင်ရတယ်ပြောတယ်။
မီးစုန်း အ၀ိုင်းကြီးက အပေါ်တက်လိုက် အောက်ဆင်း လိုက်နဲ့ ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ ဖြစ်နေတာကိုပေါ့၊ နောက်ပြီး သိုက်ပြောင်းတာ ကိုလည်းမြင်ဘူးတယ်ပြောတာဘဲ၊ မေမေနဲ့ ကျနော်နဲ့ တခန်း အိပ်တာဆိုတော့ ညညဆို သိပ်ကြောက် တာဘဲတဲ့၊ တနေ့တော့ ညအိပ်တဲ့ အချိန်မှာ အပေါ်ထပ်က ဘေးတံခါးတချပ်ပိတ်ဘို့ မေ့နေတာ ည မေမေ အိပ်ပျော်တဲ့ အချိန်မှာ လာသတိ ပေးတယ် လို့ပြောတယ်၊ ပွင့်နေတဲ့ တံခါးကနေ အမွှေး စုတ်ဖွားနဲ့ အကောင်ကြီးဝင်လာတယ် ဆိုပြီးတော့ ၊ မေမေလန့်နိုးသွားတယ်။
ပြီးတော့မှ အဲဒီတံခါး ကိုသွားကြည့်တော့ တံခါးပွင့် နေလို့ ပြန်ပိတ်ခဲ့ရ တယ်ပေါ့၊ နောက်ပြီး မော်လိုက်မှာ တောပြစ် ၀ါသနာပါတဲ့ ရဲသားတွေ တောလည် ထွက်ရင် ကျားတို့ ခွေးတူ ၀က်တူတို့ တောဝက်တွေ တို့ရခဲ့တယ် ဆိုတာ မေမေ အမြဲပြောပြတယ်။ အဲဒီမှာ ၀က်ဝံတွေလည်း အရမ်းပေါ တယ်လို့ ပြောတယ်။ မေမေ ရဲ့ ၀က်ဝံနဲ့ တွေ့ဆုံခန်းလေးလည်း ဆက်ပြီးနားထောင်ရအောင်။
မေမေက ကလေးပေါက်စလေးနဲ့ တောခေါင်ခေါင်ကြီးမှာ ဆိုတော့ အရမ်းပျင်းတာပေါ့၊ နေ့ ဆိုရင် ရဲသား မိန်းမ တွေနဲ့ တောထဲမှာ မှိုတို့ မျှစ်တို့ ခူးသွားမယ်ဆိုရင် မေမေကြီးကတော့ တားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ မေမေက အတင်း လိုက်လိုက်သွားတာဘဲတဲ့၊ သိပ်ပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ ပြောတယ်။ မေမေကတော့ သပြေပန်း တွေ ချိုး၊ တွေ့သမျှ အသီးအရွက်တွေခူးပေါ့။
တနေ့တော့ မေမေ က ထုံးစံအတိုင်း ကျနော်ကို နောက်ကြောမှာ ပိုးပြီးတော့ တောလည် ထွက်တာပေါ့၊ တွေ့ တဲ့ အသီးအရွက်တွေခူးပြီးတော့ ပြန်မယ်လုပ်တော့ အားလုံးကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ နောက်ဆုတ် ပြေးဘို့ ပြင်ကြတာပေါ့၊ အပင်ကြီး တပင်ရဲ့ ခြေရင်းမှာ ၀က်ဝံကြီး က မတ်တတ်ရပ်ပြီးတော့ ပျားအုံ စားနေတာ တွေ့လိုက်ရတော့ မေမေ လည်းနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ ပြေးရတော့တာပေါ့၊ အဲဒီနောက်တော့ မေမေ လည်း နဲနဲကြောက်သွားတယ်၊ အဲဒီက ၀ံတွေကုပ်ရင် အသေဘဲ၊ မသေရင်လည်း တသက်လုံး ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် ဖြစ်တော့တာပေါ့။
နောက်ပြီး မေမေ သွားတဲ့ ချင်းရွာလေး အကြောင်းလည်း ပြောပြချင်တယ်၊ အဲဒီချင်းရွာလေးမှာ မေမေတို့ ကြက်ဥ တို့ ဘာတို့ဝယ်ချင်တဲ့ အခါသွားကြတာပေါ့၊ အဲဒီချင်းရွာလေးကလည်း တရွာလုံး သစ်သားခြံစီးရိုး ကာထားတယ်တဲ့၊ ရွာကိုဝင်မယ်ဆိုရင် အကျိုးအကြောင်း ပြောပြတော့မှ ကြိုးလှေကားလေးချ ပေးတာတဲ့၊ မိုက်တယ်နော်၊ မေမေကလည်း အဲဒီရွာလေးသွားရတာ သိပ်ပျော်တယ်တဲ့။
နောက်ပြီးတော့ အဲဒီက မေမေသွားလည်နေကြ ရဲသားအိုကြီးရဲ့ အိမ်မှာလည်း ကင်းခြေများ ရဲ့ အဆစ် တဆစ်ကို ငါးရုပ်ဆုံ လုပ်ထားတာ လည်းတွေ့ ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်၊ ဂျပန်ခေတ်က တောထဲမှာ တွေ့ခဲ့ ရတဲ့ ထန်းလုံး လောက်ရှိတဲ့ ကင်းခြေများ ရဲ့ အဆစ်တဆစ်ကို အမှတ်တရသိမ်းထားတာလို့ ပြောတယ်၊ ဖိုးကျော့ဝထ္ထု ဖတ်ရတာထက်တောင် ကောင်းသေးတယ်၊ နောက်ပြီး အိမ်သာတွင်းတူးရင်းနဲ့ သွေးတွေ ပန်းထွက် လာလို့ နေရာပြောင်းတူးလိုက်ရတဲ့အကြောင်း၊ အဲဒါ နှစ်ချို့မြွေကြီးတွေ ကြောင့်ပေါ့၊ မြွေကြီး တွေဆို ကြီးလွန်းအားကြီးလို့ ဘယ်သူမှ မသတ်ရဲဘဲ တောစပ်ထိ ရဲသားတွေထမ်းပို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း တွေလည်း မေမေ ကပြောပြတယ်..။
ထူးဆန်းတဲ့ အောက်လမ်းဆရာကြီးရဲ့ အကြောင်းတွေကို လည်းကြားရသေးတယ်၊ အဲဒီအောက်လမ်း ဆရာကြီးက ဘုန်းကြီး ၀တ်ထားတယ် လို့ပြောတယ်။ သက္ကာန်းအရေခြုံ ထားတာပေါ့၊ အဲဒီ အောက်လမ်း ဆရာကြီးက အရမ်းဆိုးတယ်တဲ့၊ ရဲသားမိန်းမ၊ မြင်းလှည်းဆရာကြီးမိန်းမနဲ့လည်းရှုတ်နေတာတဲ့၊ နောက်ပြီး သူနဲ့ အတူနေတဲ့ ကိုရင်လေးတပါးဆိုရင် သူ့အကြောင်းကို လျှောက်ပြောလို့ တအားရိုက်တာ ဘဘကြီး သိသွားလို့ သွားတားတော့ ဘဘကြီးကို မျက်ထောက်နီကြီးနဲ့ ကြည့် ပြီး `ခင်ဗျားသတိထား၊ ကျုပ် အကြောင်း သိမယ်လို့ ပြောတယ်တဲ့ `။
ဘဘကြီးက ကိုရင်လေး ကိုလည်းသူရိုက်တာနဲ့ သေမှာ ကြောက်ပြီး ရွာပြန်ခိုင်းလိုက်တာ၊ အဲဒီ ဘုန်းကြီးက ၇ ရက် နေရင် မင်းရွာမှာ သွေးအံသေမယ်လို့ ပြောတယ်တဲ့၊ နောက်တော့ သတင်းပြန်ကြားတာ အဲဒီ ကိုရင်လေးဟာ ရွာမှာ တကယ်ဘဲ သွေးအန်သေသွားတယ် လို့ပြောတယ်။
နောက်ပြီး ဘဘကြီးလည်း အဲဒီ အောက်လမ်းဆရာ နဲ့ ပြသာနာ ဖြစ်တဲ့ ညမှာဘဲ မော်တော်နဲ့ ခရီး ထွက်ရတယ်၊ တိုက်ဆိုင်တာလားတော့ မသိဘူး ၀မ်းတွေသွားပြီးတော့၊ တော်တော် ခံလိုက်ရ တယ် ပြော တယ်၊ သူ့မျက်နှာကြီးကို လည်းတချိန်လုံး မြင်နေရတယ်ပေါ့၊ ဘုရားတရားနဲ့ နေတဲ့ သူဖြစ်လို့ သူက သေအောင် မလုပ်နိုင်တာပေါ့။ မေမေပြောပြ တာတော့ တကယ်လိုဘဲ။ အဲဒီဘုန်းကြီး အရေခြုံကို အနီးအနား မှာ ဆွမ်းကြွေးတွေ ဘာတွေလုပ်ရင် လူတွေက မဖိတ်ဘဲ မနေရဲကြဘူးတဲ့၊ အဲဒီတော့ ဆွမ်းစားတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ကိုတ၀ိုင်းသပ်သပ် ပြင်ပေးရတယ်တဲ့၊ တခြားဘုန်းကြီးတွေက သူနဲ့ တ၀ိုင်းထဲ မစားဘူးပေါ့၊ မေမေ ပြောတာတော့ `ကန်တော့ကန်တော့` မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ပုံကို သူ့ရဲ့ညာဘက် ခြေဖ၀ါးမှာ ဆေးမှင်ကြောင် ထိုးထားတယ်လို့ပြောတယ်၊ ကျနော် ဖြင့် ပြောရင်းနဲ့တောင် ကြောက်လာ တယ်၊ ဒါပေမဲ့ မေမေပြောပြတာကို ချန်မထားချင်လို့ ပြောရတာပါ။
နောက်မှ မေမေ ရဲ့ အင်္ဂလိပ်အထွက် ဂျပန်အ၀င်နဲ့ ရဲဘော်ဖြူ ရဲဘော်နီခေတ် နဲ့ ကရင်တွေ မန္တလေး ၀င်တဲ့ အကြောင်း တွေကို ပြောပြပါအုန်းမယ်။
အပိုင်း (ရ) ဆက်ရန်
Posted by SHWE ZIN U at 12:41 AM2comments Links to this post
ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းသိပ်တက်ချင်တာကို မှတ်မိနေတယ်၊ မူကြို ကျောင်းတွေဘာတွေမရှိတာလား၊ ဒါမှ မဟုတ် မထားတာလားတော့မသိဘူး၊ မူကြို မတက်ဖူးဘူး၊ အောက်က အငယ်တွေအားလုံးတော့ ထွန်းလှ ဟော်တယ် နဲ့ မျက်နှာချင်း ဆိုင်မှာ ရှိတဲ့ အစိုးရမူကြို မှာ အားလုံးတက်ရတယ်။ ကျနော်တယောက်ဘဲ မူကြို မတက်ဘူးတာ၊ ကျနော် တအားပူစာတော့ မေမေက အ.ထ.က(၁၆) (၀က်စလီကျောင်း) မှာ ကျောင်းလိုက် အပ်ပေးတယ်။ ဆရာမ ၀၀ကြီး တီချာရင် လို့ခေါ်ကြတယ်ထင်တယ်၊ သိတ်မမှတ်မိဘူး၊ အဲဒီ ဆရာမကြီးက ညာဘက်လက်နဲ့ ဘယ်ဘက်နားရွက်ကို ဆွဲခိုင်းတယ်၊ မမှီသေးလို့ မတက်ရသေးဘူးလို့ပြောတယ်။ အမှန်တော့ အသက်လည်း မပြည့်သေးဘူးထင်ပါတယ်၊ အဲဒီနှစ်မှာ အရပ်ထဲက ကျောင်းလေးမှာ အပျော်နေရတယ်၊ နောက်နှစ်မှ ၁၆ ကျောင်းမှာစတက်ရတယ်။ သူငယ်တန်းလေး၊ သူငယ်တန်းကြီး ၂နှစ် တက်ရတယ်။
ကျနော်က ကျောင်းသိပ်ပျော်တယ်၊ ကျောင်းကပွဲ တွေဘာတွေလည်း မှာလည်း ပါခဲ့သေးတယ်ဆိုတော့ တော်တော်ပျော်ခဲ့ မှာပေါ့၊ သိပ်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး၊ ဓါတ်ပုံတွေဘာတွေတော့ ရှိသေးတယ်၊ ပြန်ရှာလို့ ရရင်တော့ ကြည့် လို့ရသေးတာပေါ့၊ ၃ တန်း ၄တန်း နှစ်တွေမှာ ထင်တယ်၊ ကျနော်ကို ကျောင်းပို့ဘို့ ဖေဖေက ကျောင်းက အလုပ်သမားတယောက် (မောင်စိန် လို့ ဖေဖေတို့ကခေါ်တယ်) ကိုခေါ်ထားတယ်၊ စက်ဘီးနဲ့ အပို့ အကြို လုပ်ပေးတယ်၊ ကျနော်တို့ ၁၆ ကျောင်းက ရုံးကြီး လို့ ခေါ်တဲ့ တရားရုံးကြီး နဲ့ ကပ်ရက်၊ ရုံးကြီး အရှေ့ပေါက်က ထွက်ရင် ကျနော်တို့ကျောင်းမြောက်ဘက် ခြံစီးရိုးကိုရောက်တယ်၊ ကျနော်က အမြဲတန်း ရုံးကြီး အပေါက်ဝက ထွက်ရင် စက်ဘီးရပ်ခိုင်းတယ်၊ မောင်စိန်ကလည်း ကျောင်းအပေါက် ထိ လိုက်ပို့ ချင်တယ်၊ မရပ်ချင်ဘူး ကျနော်က စက်ဘီး မရပ်ရင် စက်ဘီးပေါ်က ခုံချတယ်။
ကျနော်တို့ တိုက်ပွဲ က မနက်တိုင်း ကျောင်းဆင်းချိန်တိုင်း၊ ကျောင်းဆင်းရင်လည်း ကျနော်က ခပ်ဝေးဝေး ရောက်မှ စက်ဘီးပေါ် တက်တာကိုး၊ နောက်တော့ မောင်စိန်က ဖေဖေ နဲ့ တိုင်ပြောတယ်၊ ကျောင်းမရောက်ခင် စက်ဘီးပေါ်က ခုံဆင်းတယ်ပေါ့၊ နောက်တော့ ပြသာနာ အဖြေရှာတော့ မောင်စိန် ကို သူငယ်ချင်းတွေက အဖေ ထင်မှာ စိုးလို့ လို့ပြောတယ်တဲ့ ။ မောင်စိန် ကဒေါသဖြစ်တယ်၊ (သူနစ်နာတယ်.. သူက လူပျိုကိုး) နင်နဲ့ ငါနဲ့က လူမျိုးတူ လို့လားလို့မေးတယ်၊ သူက ကုလားလေးကိုး၊ ဖေဖေတို့ကတော့ ရီတာပေါ့။
နောက်ပိုင်းတော့ နှစ်ဦးသဘောတူ ရုံးကြီးပေါက်မှာ ဘဲရပ်ပေးရတယ်၊ ရုံးကြီးပေါက်မှာဘဲ လာကြိုရတယ်၊ နောက်တော့ ကျနော်အောက်က အငယ်တယောက် ကျောင်းရောက်လာတော့ ဆိုက်ကားနဲ့ တက်ရတယ်၊ ကျနော် ကတော့ အဲဒီ အချိန်မှာ ကျောင်းမှာ အတန်းထဲမှာ ဗိုလ်အဆင့်ရောက်နေပြီ၊ တတန်းလုံးမှာ ဗိုလ်လေ၊ ကျနော်မှတ် မိသလောက်ပြောရရင် ကျနော် ၅တန်းနှစ်ရောက်တော့ အတန်းရှေ့မှာ မုံစား ဆင်းချိန်၊ ထမင်းစား ဆင်းချိန် တွေမှာ ကစားကြတဲ့ တန်းမြင့်ခုန်တန်းတို့ ကြိုးခုန်တန်းတို့မှာ ကျနော်ဘယ်တော့မှ တားတဲ့ ဘက်ကမပါရဘူး၊ အမြဲတန်း အသင့် ၀င်ကစားရတယ်၊ နောက်ပြီး ကျနော်တို့ အတန်းထဲမှာ ကျနော်နဲ့ မခေါ်တဲ့ သူကို ဘယ်သူကမှ မခေါ်ရဘူး၊ ကျနော်ဆိုးတေ ဖြစ်ပုံတွေလေ၊ အခုအချိန်မှာ ပြန်စဉ်းစားတော့ ဘယ်လို့ အစွမ်းအစနဲ့ များလူတွေကို သိမ်းသွင်းထားခဲ့ သလည်းမသိပါဘူး၊ အခုတော့ဗျာ မိသားစုထဲမှာတောင် စကားနားထောင်အောင် မသိမ်းသွင်းနိုင်ပါဘူး။
အဲဒီနှစ်တွေမှာဘဲ ကျနော်တို့အိမ်ပြောင်းရတယ်၊ ကျနော်တို့ ဘဘကြီးဝယ်ထားတဲ့ ရန်မျိုးလုံအိမ် ကနေ ဗောဓိကုန်းရပ်ကွက် (မန္တလေး တက္ကသိုလ်နားလေး) ကိုပြောင်းရပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ်ပိုင် အိမ်ရှိရဲ့သားနဲ့ ပြောင်းရလည်း ဆိုတာကြီးလာတော့မှ သိရတာပါ၊ ကျနော် အဒေါ် အငယ်က အိမ်ခြင်းကပ်ရက် ကျနော်သူငယ်ချင်း ရဲ့ဦးလေးနဲ့ ကြိုက်ကြတော့ သဘောမတူကြလို့ တဲ့ဗျာ၊ အဲဒါနဲ့ ကျနော်တို့ မိသားစုက အိမ်ငှားနေပြီး အဲဒီအဒေါ်ကိုခေါ်သွားရတာ။
တမြို့တရွာဆိုလည်း တော်သေး အခုတော့ဗျာ စက်ဘီးနဲ့ သွားရင်တောင် ၁၀ မိနစ်လောက်သွားရတဲ့ ခရီးလေးကို၊ အလုပ်ရှုတ်ခံလို့ ပြောင်းနေရသေး၊ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုညံကြလည်းတော့ မသိဘူး ကျနော်အဖေကတော့ ကလေး၂ယောက် မိန်းမတယောက်၊ ညီမတယောက် နဲ့ အိမ်လခ (၆၀)ကျပ် အကုန်ခံပြီး ၇၂လမ်း နဲ့၇၃လမ်းကြား (အခုတော့ ဗန်မော်တိုက် လမ်းကြား) ဗောဓိကုန်း ထဲကို ပြောင်းလာရပါတယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းက အခုလိုစည်စည်ကားကားလဲ ရှိသေးတာမဟုတ်ဘူး၊ အိမ်ဝန်းကြီးတွေကဆို အကျယ်ကြီး တွေ။ အဆောင် လေးတွေကလည်း ခပ်သေးသေးလေးတွေဘဲ၊ အများစုက အစိုးရအဆောင်တွေမှာ နေကြတာဆိုတော့ အဆောင် စီးပွားရေးကလည်း ခပ်သေးသေးပါ၊ ကျနော်အတွက်တော့ ဗောဓိကုန်း ပြောင်းရတာဟာ တော်တော်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်၊ ဖေဖေငှားနေတဲ့ ဆရာချောင်းရဲ့ ခြံက အကျယ်ကြီးပါ တခြံလုံးမှာ မာလကာပင်တွေ၊ ဂွေးသီးပင်တွေ အပြည့်ပါတယ်။ မာလကာသီးကလည်း အူနီသီး တွေရော အူဖြူသီး တွေရော တချို့ အပင်တွေဆို အသီး အကြီးကြီး တွေသီးတယ်။ အခုခေတ်လို ကီလိုသီးတွေ ဘာတွေတော့ မပေါ်သေးပါဘူး၊ အပင်တွေကတော့ အကြီးကြီးတွေပါ၊ မာလကာ သီးပေါ်ချိန်ဆိုရင် တောင်းတွေနဲ့ မာလကာသီးတွေ လာဝယ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကတော့ အပင်ပေါ်က ဘယ်တော့မှ ဆင်းတော့တာမဟုတ်ဘူး စာဖတ်လည်း အပင်ပေါ်မှာဖတ်တယ်၊ အကောင်းဆုံး ရွက်ပုန်းသီး တွေ ရှာခူးစားတယ်။
ကျနော်အတွက် ကံကောင်းခြင်းတခုကတော့ ကျနော်တို့နေတဲ့ အိမ်နဲ့ကပ်ရက်မှာ မြန်မာစာက ဆရာဦးအောင်သန်း၊ ဆရာမဒေါ်ယဉ်ယဉ် (ဆရာမြသန်းတင့် ရဲ့ နှမ) တို့ရဲ့ စာအုပ်ပုံကြီးပါဘဲ၊ ဆရာတို့ က စည်းကမ်းကြီးတယ်၊ တအုပ်ပြီးမှ တအုပ်ငှားတယ်။ အဲဒီမှာလည်း ကျနော်စာဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျနော်တို့အိမ်ကနေ အရှေ့ထဲဆက်သွားရင် စားပင်တွေစိုက်တဲ့ ခြံတွေရှိတယ်၊ ရေနီမြှောင်းဘေးမှာပေါ့၊ ခါချက်ဥတွေ၊ ဗူးပင်တွေ၊ တခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်ပင် တွေရောအများကြီးပါဘဲ၊ အဲဒီမှာ အသီးအရွက်တွေ သွားဝယ်ရတဲ့ အခါကျနော် သိပ်ပျော်ခဲ့တာလည်း မှတ်မိသေးတယ်။ ဗောဓိကုန်း ဘုရားနဲ့လည်း နီးနီးလေးဆိုတော့ နှစ်တိုင်း ညောင်ရေသွန်းပွဲတော် ကျင်းပတဲ့ ကဆုန်လပြည့်နေ့ ဆိုရင်ကျနော်တို့ တွေဘုရားကို တနေ့ အခေါက်ပေါင်းများစွာ သွားခဲ့ကြတာမှတ်မိသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ လပြည့်နေ့တိုင်း မိုးရွာတာကိုတော့ အမှတ်ရမိတယ်၊ ကျနော်စိတ်ထဲ မှာ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဆိုရင် မိုးရွာရမယ်လို့ အခုအချိန်ထိ ထင်နေမိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်း တော့ ကျနော်တို့မန်းတလေး မှာ ကဆုန်လပြည့်နေ့တိုင်း မိုးမရွာတော့ပါ။
အဲဒီ ဗောဓိကုန်းအိမ်မှာ ဘဲကျနော်ရဲ့ ပထမဆုံး လက်စွပ်ကလေးကို သရေကွင်းနဲ့လား မန်ကျီးစေ့နဲ့ လားမသိ လဲပြီးကစားပြစ်လိုက်ပါတယ်။ အိမ်ကသိတော့ လိုက်တောင်း ပေမဲ့လည်း ပြန်မရတော့ပါဘူး။ နောက်ပြီး ကျနော်ဘ၀မှာ ပထမဆုံးသူခိုးဆိုတာတွေ့ဘူးတယ်။ ဗောဓိကုန်း အိမ်သူခိုးခိုးခံရတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော် မေမေရဲ့ညီမ အငယ်ဆုံး ဒေါ်လေးမန်း ကလားရှိုး ကရောက်နေတယ်၊ အပျိုပေါက် အရွယ်လို့ပြောတာဘဲ၊ ဒေါ်လေးမန်း က အလှအပလည်းသိပ်ကြိုက်တယ်၊ သီချင်းဆိုတာ တွေလည်း ၀ါသနာပါတယ်၊ လာရှိုး မှာ လာရှိုးသိန်းအောင် (ဂျင်မီဂျက်) တို့ တီးဝိုင်းနဲ့ သီချင်းတွေ ဘာတွေ ဆိုသေးတယ်၊ သူ့ ရဲ့အ၀တ်အစားထဲ့တဲ့ သေတ္တာပါသွားတယ်၊ နောက်ပြီး ကျနော်တို့ဘဘကြီး ရဲ့ ရဲဝတ်စုံ တွေ၊ ရဲပစ္စည်း တွေထည့်ထားတဲ့ သံသေတ္တာ အနက်ကြီးပါသွားတယ်၊ ကျန်တာတော့ဘာမှ မပါဘူး၊ ကျနော် တို့အဖေချမ်းသာတာလည်း စာအုပ်တွေဘဲရှိတာဆိုတော့ သူခိုးတော့ တော်တော် စိတ်ညစ် သွားမှာဘဲ။
မနက်မိုးလင်းတော့ ရေနီမြှောင်းထဲမှာ သံတ္တောကြီးမြောလာတယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ပျောက်သွားတဲ့ သံတ္တာကြီးဖြစ်နေတယ်။ သုခိုးကရဲပစ္စည်းတွေဆိုတော့ ကြောက်လို့ ရေနီမြှောင်းထဲ ပြစ်ချခဲ့တာနေမှာပေါ့၊ ဒေါ်လေးမန်း အ၀တ်သေတ္တာကတော့ ရဲကသူခိုးမိမှ လာအကြောင်းကြားပြီး အမှု့ပြီးမှ ပြန်ရမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒေါ်လေးမန်းကတော့ မာလကာပင်ပေါ်တက်ပြီး ငိုငိုနေတာ သူပစ္စည်း တွေပြန်မရလို့၊ ဖေဖေ ကပြောတယ် `နင့်အ၀တ်တွေငါပြန်ရော်ပေးပါမယ်၊ တလတစုံဝယ်ပေးပါမယ်` ပြောမှ အငိုတိတ်သွားတယ်။ နောက်ပြီး သူခိုးအမှု့စစ်တဲ့ ရက်ချိန်းတွေမှာ ရဲစခန်းသွားပြီး သက်သေခံရတယ်၊ မေမေ ကတော့ သူခိုးငြိုးမှာ ကြောက်လို့ သူခိုးကို မကြည့်ရဲဘူးတဲ့၊ ကျနော် ကတော့မြင်ဘူးအောင် ကြည့်ထားရတယ်၊ ဟဲ ဟဲ သူခိုးဆိုတာ ဂျိုမပါပါဘူး။
ကျနော်တို့ မိသားစု ဗောဓိကုန်း အိမ်မှာ နေရတော့ ဖေဖေက ကျနော်အမေကို ညကျောင်းတက်ပြီး ၁၀တန်း ပြန်ဖြေခိုင်းတယ်။ မေမေ က ညနေဆို ကျောင်းသွားတက်ရတယ်၊ ညဆို သချာင်္တွေတွက်ရတယ်၊ မေမေလည်း အရမ်းပင်ပန်း၊ ကျနော်တို့ လည်းကသီတာပေါ့၊ ကျနော် အောက်က မောင်အငယ်ကတော့ ရေနံဆီကို ၀ီစကီ မှတ်လို့ ပုလင်းလိုက်မော့ချလိုက်တာ ဆေးရုံရောက်သွားသေးတယ်။ နောက်ညီမ တယောက် ကတော့ ပုဂံဆေးတဲ့ ရေတွေကို သောက်ပြစ်လိုက်လို့ အထက်လန် အောက်လျှော့ ဖြစ်ပြီး ဆေးရုံ ရောက်သွားတယ်။
နောက်ပြီး ကျနော်တို့အိမ်မှာ ဖေဖေ ရဲ့ဟင်းချက်တဲ့ ဥပဒေ ကိုပြောချင်သေးတယ်၊ တပတ်မှာ အသားဟင်း (၂) ရက်ဘဲချက်ရတဲ့ ဥပဒေလေ၊ အသားဟင်းချက်တဲ့ နေ့တွေမှာ တအိမ်လုံး ပျော်ကြတာပေါ့၊ နောက် ပြီး ဖေဖေ ကကျန်တဲ့ ရက်တွေမှာ ပဲနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အများကြီးချက်ရတယ်၊ အသားအစား ပဲ ပေါ့၊ ကျနော်တို့ဖေဖေရဲ့ အတွေး ကတမျိုး ချမ်းသာတဲ့ သားသမီး တွေ ရဲ့ကလေးတွေက အစာမစားချင်လို့ မိဘတွေကချော့မော့ ကျွေးနေရ တယ်ပေါ့၊ သူ့သားသမီး တွေကိုလည်း စားချင်တာကို ကြိုက်သလောက် စားစေချင်တယ်၊ ဘယ်လောက် ဆိုတာ ကန့်သတ်မပေးရဘူးတဲ့၊ အဲဒီတော့ ပဲတို့ ဟင်းသီး ဟင်းရွက် တို့ကိုလည်း limit မလုပ်ဘူး၊ အသားဟင်း ချက်စားတဲ့နေ့ လည်း limit မလုပ်ဘူး၊ ကြိုက်သလောက် စားရတယ်၊ အဲဒီတော့ အသားချက်လည်း အများကြီးချက်ရတာပေါ့၊ ဘဲဥတွေ ဘာတွေချက်ရင်လည်း တယောက်တလုံးလို့ မေမေကပြောရင် ရန်ဖြစ်ကြရော၊ အမြဲတန်း အဲဒီလိုပါဘဲ။
ကျနော်တို့ မောင်နုမ တွေကလည်း အလိုက်ကမ်းဆိုး သိတဲ့သူ တယောက်မှ ပါတာမဟုတ်ဘူး၊ မေမေ ဘဲအမြဲ ဟင်းမလောက်လို့ ထပ်ဝယ်ရတာနဲ့ ဒုက္ခရောက်တာပေါ့၊ ကျနော်ဆို အဲဒီလို တိုင်းတာ စားရတယ်ဆိုတာ သိပ်မသိဘူး၊ အခုကြီးလာတော့ မှ အဲဒီလို့ တိုင်းတာစားရတယ်ဆိုတာ သိတယ်။ မေမေ ဒုက္ခရောက်တာပေါ့၊ အဲဒါကြောင့် မေမေမှာ ဈေးဘိုးအများကြီးကုန် အကြွေးတွေ တင်တာ နေမှာပေါ့။
ကျနော် အဖေနဲ့ အမေ ဟာဘယ်တော့ မှ တယောက်နဲ့ တယောက်နားမလည်ကြဘူး၊ ကျနော် မေမေ ကလည်း ကျနော်တွေ့ဘူးသမျှအမေ(သူများအမေတွေပြောတာနော်) တွေထဲမှာတော့ တော်တော်ကို ရိုးတဲ့ အမေပါ၊၊ မေမေ ငယ်ငယ်က အဖြစ်တခုပြောပြရအုန်းမယ်၊ ကျနော်တို့ အဖိုးအလုပ်ထွက်ပြီးတော့ မေမေတို့ တောင်မြို့မှာ ခဏနေသေးတယ်၊ ရန်ကုန် မပြောင်းခင်ပေါ့။
အဲဒီအချိန်မှာ မေမေက(မီးရထား လား ကားလား မသိ) နဲ့ မန္တလေးကို ကျောင်းလာတက်ရတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ သူတောင်းစားမလေး ကအမြဲတန်းလာ တောင်းတယ်၊ မေမေ က အဲဒီသူတောင်း စားမလေးကို ခင်သွားပြီးတော့ အိမ်လိပ်စာ ပေးခဲ့သတဲ့။ တောင်မြို့ အိမ်လိပ်စာပေါ့၊ အ၀တ်အစား အဟောင်းတွေ ရှာပေး မယ်ပေါ့၊ ကျောင်းပိတ် ရက်လာခဲ့ပေါ့။ ကျောင်းပိတ်ရက် ရောက်ပါရော၊ ဟဲ ဟဲ၊ မေမေ ရဲ့ သူတောင်းစား မိတ်ဆွေ မလေးက အပေါင်း အပါတွေနဲ့ ချီတက်လာပါလေရော။
အိမ်ရှေ့မှာ မေမေနံမည် မေးပြီးရောက်လာတဲ့ သူတောင်းစားအုပ်ကြီးကို ကြည့်ပြီးတော့ မေမေကြီးရဲ့ ပေါက်ကွဲ သံစဉ်တွေပေါ့။
နောက်တခု လည်းဖော်ကောင်လုပ်ရအုန်းမယ်၊ မေမေ က ဖေဖေရဲ့  ရီးစားစာတွေဖတ်ပြီး feeling တွေတက်ပြီး ယူခဲ့တာမဟုတ်လား၊ နောက်တော့ မေမေတို့ ရပြီးတော့မှ ဖေဖေ ရဲ့သေတ္တာ ထဲမှာ မေမေကို ပေးမဲ့ ရီးစားစာတွေ (ဒေါ်ကြီးရဲ့ လက်ရေးနဲ့ ရေးထားတာတွေပေါ့) တထပ်ကြီးတွေ့ပါလေရောတဲ့၊ အဲဒီ တော့မှ မေမေခမြာ ဒေါ်ကြီးနဲ့ရီးစားထားနေရတာ သိသွားတော့တယ်၊ ဖေဖေက သူ့လက်ရေးနဲ့ ကူးရေး ပြီးတော့ မေမေကိုပေးခဲ့တာကိုး။ အခုအထိ အဲဒီအကြောင်းပြောရင် မေမေက စိတ်ဆိုးသေးတယ်။ မေမေ အကြောင်း တွေလည်း အများကြီး ရေးချင်သေးတယ်၊ အခုတော့ ခဏ နားအုန်းမယ်ဗျာ။
Posted by SHWE ZIN U at 5:54 AM 1 comments Links to this post
ငယ်ဘ၀များ(၄) နှင့်စာတော်ဖတ် ခင်ခင်
စာတွေဖတ်တဲ့အခါ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ဘာစာတွေစဖတ်လည်း လို့မေးရင် ကျနော်ကလည်း ဖြေချင် ပါတယ်၊ စာမဖတ်တတ်ခင်ကထဲက တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက် မှာ ကိုယ် ကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေ ရွေးပြီး ဖတ်ခဲ့ပါတယ်လို့။
ကျနော်ဘ၀မှာ အဖေကို မကျေနပ်တာတွေ တော်တော်များများ ရှိခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေအားလုံးကို ကျနော့်ကို စာဖတ်တတ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တာနဲ့တင် အားလုံးကို ချေဖျက်ပြစ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျနော့်ဖေဖေပြောတဲ့ စကားတခွန်းကိုလည်း ကျနော် အမြဲတန်း မှတ်မိနေတယ်၊ တိုင်းပြည် တပြည်မှာ တနှစ်မှာ ဆရာဝန် ဘယ်နှစ်ယောက်၊ အင်ဂျင်နီယာ ဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုပြီး မွေးထုတ်လို့ ရတယ်၊ စာရေးဆရာတို့ သတင်းစာဆရာတို့ ဆိုတာတော့ မွေးထုတ်လို့ မရဘူးပေါ့လေ၊ စာရေးဆရာတို့ သတင်းစာဆရာ တို့ ဆိုတာ တကယ့်ကို အထင်ကြီးစရာ၊ သိပ်တော်တဲ့ ကြီးကျယ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ် မြင်အောင် ပြောဆိုခဲ့တဲ့ ကျနော် ဖေဖေရဲ့စကားတွေ ကလည်းမမေ့နိုင်စရာပါ၊ နောက်ပြီး ကျနော်က အဖေကိုသိပ်ချစ်တယ်လေ ကျနော်ဘ၀မှာ ဖေဖေအထင်ကြီးတာလေး တခုတော့လည်း ဖြစ်ပြချင်တာ ပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့လည်း တကယ်မလွယ်ပါဘူး။
ကျနော်ငယ်ငယ် က ကျောင်းမနေခင်ကပေါ့ မေမေက နောက်ကလေးတယောက် နဲ့ အိမ်မှု့ ကိစ္စတွေနဲ့ ရှုတ်နေတော့ ကျနော်က ဖေဖေနဲ့ ကျောင်း(မန္တလေးတက္ကသိုလ်) ကိုအမြဲလိုက်သွားရပါတယ်၊၊ ကျောင်းရောက်ရင် တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက် ကိုသွားပါတယ်၊ စာကြည့်တိုက်မှာ စာအုပ်ငှားကြပါတယ်၊ ဖေဖေက ဆရာဆိုတော့ စာအုပ်တွေထားတဲ့ အထဲထိဝင်ပြီး စာအုပ်ရှာလို့ ရပါတယ်၊ ကျနော်က စာမဖတ် တတ်သေးတဲ့ သူဆိုတော့ လူထုဦးလှရေးတဲ့ ပုံပြင်စာအုပ်တွေနားမှာ ပုံပြင်စာအုပ်တွေကို အရုပ်ကြည့် ပြီးရှာရပါတယ်။ ကျနော်ကြိုက်တဲ့ စာအုပ်တွေငှားပြီးမှ ကျနော်တို့ ဌာန ကဖေဖေအခန်းကိုသွားပါတယ်၊ အဲဒီမှာ ခဏလောက်နေပြီးရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်းဘဲ ဖေဖေတပည့်မများ (သို့) ဖေဖေသူငယ်ချင်း ဆရာမအပျိုကြီးများ နဲ့ သစ္စာဆောင်တို့ ရွှေမန်းဆောင်တို့ မှာအလည်လိုက်ပြီး ၀ါးတီးစခန်းဖွင့်ရပါတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့ ကျနော်ရဲ့ စာဖတ်ချင် တဲ့ ချင်ခြင်း ကစပါပြီ၊ ကျနော်တို့ အိမ်မှာ မေမေကိုကူဘို့ ရွာကခေါ်ထားတဲ့ မမိုးရီ ဆိုတဲ့ အမကြီးတယောက်ရှိပါတယ်၊ သူကစာတော့ဖတ်တတ်တယ်၊ ကျနော်က ကျနော်ငှား လာတဲ့ပုံပြင်စာအုပ်တွေကို ချက်ခြင်းဖတ်ခိုင်းပါတယ်။ ကျနော်ဖေဖေရဲ့ အမိန့်ကလည်း ရှိတယ်လေ၊ အိမ်အလုပ်တွေမလုပ်ရင်ရတယ် ကလေးတွေကိုစာဖတ်ပြရင်တော်ပြီ လို့ ပြောထားတာကိုး၊ အဲ ဒီမှာ မမိုးရီ ကလည်းအကြိုက်ပေါ့ သူကလည်း စာတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖတ်ပြပါတယ်။ ကျနော် ကလည်း အခွာမခံပါဘူး၊ အိမ်ကလူတွေကတော့ မခိုင်းရတော့ဘူးပေါ့။ အဲဒီမှာ ပေါက်ကွဲ သံစဉ်တွေလေ မေမေကတော့ ဘာမှမပြောပါဘူး၊ မေမေကြီး ဒေါ်တင့်တင့်နဲ့ ကျနော်အဒေါ်တွေပေါ့၊ ခိုင်းစရာ ရှိတာ မခိုင်းရဘူး ဒီစာဘဲ ဖတ်ပြနေရတယ်ပေါ့၊ ကျနော်ကလည်း ဘာရမလည်း ဖေဖေ ကပြော ထားတယ်၊ စာဖတ်ပြ ရမယ်ပေါ့၊ အဲဒီမှာ တိုက်ပွဲကတော့ ခဏခဏပေါ့။
နောက်တော့ မေမေကြီးဒေါ်တင့်တင့်ကပြောတယ် `မောင်လှမြင့် တို့ကသူသမီးကို စာတော်ဖတ် တွေနဲ့ဘာတွေနဲ့ ထားတာပေါ့` အရွဲတိုက်ပြီးတော့ ပြောတာလေ၊ ရှေးတုန်းက နန်းတွင်းထဲမှာ တော့ စာတော်ဖတ် တွေဘာတွေရှိတာကိုး၊ နောက်တော့ မမိုးရီ ကိုလည်း စာတော်ဖတ်ခင်ခင် လို့ဘဲ ခေါ်တော့ တယ်။ ကျနော့် ကတော့ ကိုယ်စာဖတ်ပြဘို့ တခုဘဲ သိတာ ကျန်တာဘာသိမှာလည်း။ ဖေဖေ ကျေးဇူးကြီး ပါတယ်။ နောက်တော့ ကျနော်စာဖတ်တတ်သွားတော့ ကျနော်နဲ့တော့ ပြသာနာပြီးသွားပေမဲ့၊ ညီမလေး တွေ မောင်လေး တွေနဲ့ နောက် စာတော်ဖတ်တွေ တယောက်ပြီးတယောက် နဲ့ ပေါ့။
ဖေဖေက လစဉ်၊ အပတ်စဉ် ကျနော်တို့ အတွက် စာအုပ်တွေအမြဲတန်း ၀ယ်ပေးတယ်လေ၊ ကျနော် မှတ်မိ သလောက် ရွှေသွေး၊ တေဇ၊ ရွှင်ပြုံး၊ လူရည်မွန်၊ မြ၀တီ၊ ငွေတာရီ နဲ့ နေ့စဉ်သတင်းစာ တွေယူတယ်ပေါ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ရွှင်ပြုံး၊ သောက်ကြာနေ့ မှာ လူရည်မွန်၊ စနေနေ့မှာ ရွှေသွေး၊ တနင်္ဂနွေမှာ တေဇ လာတယ်ထင်တယ် (ထွက်ရက်များမသေချာပါ)၊ ကာတွန်းထွက်တဲ့နေ့ သတင်းစာသမား လာတဲ့ အချိန် ဆိုရင် အိမ်ရှေ့ မှာထွက်ပြီး ကာတွန်းမျှော်ရတာ အလုပ်တခုလေ၊ နောက်တော့ ကျနော် မောင်လေးနဲ့ ညီမလေး လည်း စာဖတ်တတ်လာတယ်၊ ကျနော်တို့ ၃ ယောက်အတူတူမျှော်ရတာပေါ့၊ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်က ဆရာကြီးလေ ဘယ်သူအရင်ရရ `မမရွှေစင်ဦးပြီးရင်ဒို့`ဆိုပြီး လာပေးရတယ်လေ ဟဲ ဟဲ၊ အခု အချိန်ထိ ကျနော်ကို ဗိုလ်ကြတယ် ဆိုပြီး အမှတ်ရတိုင်း ပြောပြောနေကြတယ်၊ ကျနော်ပြန်စဉ်းစားတော့ ကျနော်က စာတော်တော်ဖတ်တတ် နေပြီဆိုတော့ ကျနော်အရင်ဖတ်တာ တရားပါတယ်၊ သူတို့က စာလုံး ပေါင်းဖတ်နေတာ ကျနော်က ဘယ်စောင့်နိုင်မှာလဲနော်။
နောက်တော့ ကျနော်ရဲ့ စာဖတ်တဲ့ အကျင့်ကဘိမ်းစွဲ သလိုဖြစ်သွားပြီး စာမဖတ်ရရင်မနေနိုင်တော့ဘူး၊ ဖြစ်သွားတယ်၊ နောက်တော့ တပတ် မှ ၂အုပ်၃အုပ် ဖတ်ရတဲ့ ကာတွန်းတွေနဲ့ လည်း မရတောဘူး၊ ကျနော် တို့ အ.ထ.က ၁၆ မှာ အဲဒီတုန်းက စာကြည့်တိုက်လေးရှိဘူးတယ် ထင်တယ်၊ အဲဒီထဲ ကစာအုပ်တွေလည်း အကုန်ဖတ်ပြီးသွားပြီ၊ စာအုပ်ဆိုင် ကလည်း အဲဒီအချိန်တုန်းက ရှားလိုက်တာ၊ ကျနော်သိလောက်တော့ ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ၂ဆိုင်လောက် ဘဲရှိတယ် ထင်တယ်၊ အဲဒီဆိုင်က စာအုပ်တွေ ကို တောက်လျှောက် ငှားဖတ်တော့တာဘဲ၊ မုံ့ဘိုးဆိုတာမရှိဘူး စာအုပ်ဘိုးဘဲ ရှိတော့တယ်၊ အခုတော့ အင်တာနက် ဘိုး ပေါ့နော်။
စာအုပ်ပြန်အပ်ရမယ့် အချိန်မှာ ပိုက်ဆံမရှိလို့ စာအုပ်ပြန် မအပ်နိုင်တာတို့ စာအုပ်ရှာမတွေ့လို့ မအပ်လိုက် ရဘဲ ရက်လွန်သွားတာ တို့ ဆိုတာကျနော့် ဘ၀ရဲ့နေ့စဉ် ဖြစ်စဉ်တွေလေ၊ စာအုပ်ပျောက်လို့ ရော်ရတာတွေ ကတော့ မရေတွက်နိုင်အောင်ပါဘဲ။ ကျနော်ငယ်စဉ် ဘ၀တွေကတော့ စာ စားရင်းကြီးပြင်း လာတယ်ပေါ့၊ တခါမှာတော့ ကျနော့် ဖေဖေကို သနားသွားလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်၊ စာအုပ်ဆိုင် တဆိုင်က စာအုပ်ကငှားပြီး ပျောက်သွားတယ်၊ ကျနော်လည်း ဘယ်လိုမှ အဲဒီအချိန်က ရော်ပေးဘို့ ပိုက်ဆံက ရှာမရဘူး၊ အဲဒါနဲ့ ဒီအတိုင်းဘဲ နေလိုက်ရတာပေါ့၊ ရင်ထဲမှာတော့ အမြဲတန်းတထိတ်ထိတ်ပေါ့ ဘယ်တော့ လာတောင်း မလည်းပေါ့၊ အဲဒီစာအုပ်ဆိုင်က ကလည်း တော့ တော့ကိုအပေါက်ဆိုးတာ၊ ကျနော်လည်း အိမ်မှာ နေသာနေနေ ရတာ အဲဒီအချိန်တုန်း ဧည်သည့် လာတိုင်း စိတ်တထင့်ထင့်နဲ့ပေါ့၊ လာမဲ့ လာတော့ လည်းတကယ့် အချိန်ကောင်း လကုန်ခါနီး၊ ကျနော့်ဖေဖေ ကျောင်းသွားတော့မဲ့အချိန်၊ စာအုပ်ဘိုး ရယ် ရက်လွန်ကြေး တွေရယ်ဆိုတော့ အများကြီးပေါ့၊ ကျနော် မျက်နှာလည်း ဇီးရွက်လောက် ရှိတော့တာပေါ့၊ ကျနော်အဖေ ကလည်း ကလေးတယောက် စာအုပ်ဘိုး ရော်ရတာများ လွန်းတော့ မျက်စိ မျက်နှာ ပျက်လို့ ပေါ့၊ နောက်တော့ အရော်ပေးလိုက်တယ်၊ စာအုပ်ဆိုင်ကိုလည်းပြောလိုက်တယ် ဒီကလေး လေး စာအုပ်လာငှားရင်းမငှားဘို့ပေါ့၊ နောက်ပြီး ကျနော်ကိုလည်းပြောတယ်၊ လကုန်ခါနီး ပိုက်ဆံလည်း မရှိတော့ဘူး ကျောင်းသွားရင်တောင် အိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံမပါတော့ဘူးဆိုတော့ ကျနော် ဖေဖေကိုအရမ်း သနား သွားတယ်၊ အဲဒီနောက်မှာတော့ စည်းကမ်း တော်တော်ရှိသွားတယ်။
စာအုပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဒုတိယပြုစုပျိုးထောင်ပေးသူကတော့ ကျနော်တို့အခေါ် ဦးအုန်း (အုန်းမြင့်လှိုင်) ပါဘဲ၊ ကျနော် ၆တန်း လောက်က ဦးအုန်း ကျူရှင်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ တက်ရတယ်၊ ဦးအုန်းက ပန်းသတင်း ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်လေး တဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ ကျနော်တို့ ကဦးအုန်းကျူရှင်မှာ တက်ရတာဆိုတော့ ပန်းသတင်းနဲ့ ကျနော်တို့ က ခွဲမရအောင်ပါဘဲ၊ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျနော်ဖတ်တတ်တာ ခင်နှင်းယု ၊ ခင်ဆွေဦး၊ မ၀င်းမြင့်တို့ ခင်စိန်လှိုင်တို့ အဆင့်ဘဲ၊ ဘာသာပြန်တွေဘာတွေလည်း ဘယ်ဖတ်နိုင်သေးမလဲ၊ အဲဒီအချိန်မှာ ဦးအုန်း က စာအုပ်တွေရွေးပေးတော့တာဘဲ ဂေါ်ကီ ရဲ့ ဘာသာပြန်တွေ၊ နောက် တခြား ဘာသာပြန် စာအုပ်တွေ၊ တအုပ်ပြီးတအုပ် ရွေးပေးတယ်၊ ရက်လွန်ကြေးဘယ်တော့မှ မယူဘူး၊ အငှားခ လည်း ယူမယ်မထင်ဘူး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဦးအုန်း၊ ဦးအုန်း ရေးစေချင်တဲ့ စာတွေကို ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်စာရေးဆရာ၊ ကိုယ်တိုင် အယ်ဒီတာလုပ်ပြီး စရေးနေပါပြီ၊ ဟဲ ဟဲ မိုက်တယ်နော်။
ကျနော်ငယ်ငယ်က ပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူးတဲ့ ဦးအုန်းရဲ့ကျူရှင်အကြောင်းတော့ နဲနဲ ပြောလိုက်ချင်သေးတယ်၊ ဦးအုန်းရဲ့ မိဘများလက်ထက်ကထဲက အခုနေရာမှာ လှိုင်ခေတ်မှီ ဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဖွင့်ထားတဲ့ နေရာဘဲ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျောင်းတွေ ဖွင့်ခွင့် မရတဲ့အချိ်န်မှာ အဲဒီကျောင်းကြီးကျန်နေတာဘဲ၊ အဲဒီထဲမှာ အရင်ကျောင်းတုံးက အကြွင်းအကျန် ကစားစရာဒါန်းတွေ ဆီးဆော်တွေကလည်း ကျန်သေးတယ်၊ ကျနော်တို့ မန္တလေး အခေါ် တပြလောက်ကျယ်တယ်။ တကယ်ကို အကျယ်ကြီးပါဘဲ၊ အဲဒီခြံထဲမှာ အပင် တွေ ကလည်း စုံနေတာဘဲ၊ကျနော်တို့လို စာအုပ်ဘိုးနဲ့ ဘိုင်အမြဲတန်းကျနေတဲ့ သူတွေအဖို့တော့ ခြံထဲက ဘန်ဒါပင် တွေ၊ မာလကာပင်တွေ၊ သရက်ပင်တွေ ဟာ ကျနော်တို့ မုံ့ပင် တွေဘဲပေါ့။
ကျနော် ဘယ်လောက်ထိပျော်ခဲ့ သလည်းဆိုတာ ဦးအုန်းနဲ့ စာသင်ခဲ့တာကို သိပ်မမှတ်မိဘူး၊ ခြံထဲမှာ ကစားခဲ့တာနဲ့ စာအုပ်ဆိုင်အကြောင်းဘဲ မှတ်မိတော့တယ်။ နောက်ပြီး ဦးအုန်းက စာအုပ်တွေ ကျနော်တို့ကို ပေးငှားပြီးရင် ပြန်အပ်တဲ့ အချိန်မှာ ငှားထားတဲ့ စာအုပ်အကြောင်းမေးလေ့ရှိတယ်၊ ကျနော်တို့ တကယ် ဖတ်မဖတ် နဲ့ ကျနော်တို့ ရဲ့ စာ နားလည်နိုင်မှု့ စွမ်းရည်ကို သိချင်လို့ နဲ့တူပါတယ်။ ဒီလို့ နဲ့ ကျနော် စာကောင်း ပေကောင်းတွေ ရွေးချယ် ဖတ်တဲ့အကျင့် ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဘ၀အတွက် မမေ့နိုင်စရာ ကျေးဇူး တွေပါ။
နဲနဲ ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့ စာရေးတဲ့ အကျင့် နဲ့ ဘာသာပြန်တဲ့ အကျင့်ကိုဦးအုန်း က အင်္ဂလိပ်စာ သင်ရင်း လေ့ကျင့်ပေး သွားပါတယ်၊ စာတပုဒ် ကို ဦးအုန်းနဲ့ အတူတူ ဖတ်ရပါတယ်၊ ပြီးရင် အိမ်ကနေ အဲဒီစာပုဒ် လေးကို ဘာသာပြန်ရေးရပါတယ်၊ ပြီးရင် ဦးအုန်းကသေချာဖတ်ပေးပါတယ်၊ ကျနော်တို့လည်း ဖတ်တဲ့သူက သေချာဖတ်ပေးတာဆိုတော့ သေချာရေးရတော့တာပေါ့၊ ဒါတွေက သိတ်တော့မကြာခဲ့ပါဘူး၊ နောက်တော့ ဘ၀တွေ အမျိုးမျိုး ပြောင်းသွားတာဆိုတော့ ကျနော်တို့ အနေဝေးသွားကြပါတယ်၊ ဦးအုန်း လည်း ကျောင်းဆရာ၊ စာအုပ်ဆိုင်ရှင် ဘ၀ကနေ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ရှင်ဘ၀နဲ့ လက်ဘက်ရည်တွေ ဖျော်နေရသေး တယ်နော်၊ ဦးအုန်းရဲ့ အများနဲ့မတူ တမူခွဲထွက်ခဲ့ တဲ့ ရွှေတြိဂံ ဆိုတဲ့ လက်ဘက်ရည် ဆိုင်လေး ကိုလည်း လွမ်းမိပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျနော် ဘ၀တလျှောက် ဦးအုန်း နဲ့ တွေ့တိုင်း စာတွေဖတ်ဖြစ်လား၊ စာတွေရေးဖြစ်လား ဆိုတာကို မမေ့မလျော့ အမြဲမေးလေ့ရှိပါတယ်၊ ကျနော် စာရေးဖြစ်တယ်၊ သိတ်တော့ မများပေမဲ့ နဲနဲတော့ ရှိတယ်ပေါ့၊ ၂ ပုဒ်လောက်တော့ မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ပါဘူးတယ်လို့ ပြောတော့ ဦးအုန်း က အရမ်း ၀မ်းသာ နေတယ်၊ ကျနော် ဘာဘွဲ့တွေရလည်း၊ ဘာစီးပွားတွေ လုပ်နေလည်း ဆိုတာ ဦးအုန်းစိတ်မ၀င်စားဘူး၊ ကျနော် စာဖတ်ဖြစ်တယ် စာရေးဖြစ်တယ် ဆိုရင် ဘ၀မှာ တိုးတက်တယ်ပေါ့၊ ဘ၀ရဲ့တိုးတက်မှု့ ကို စာဖတ်ခြင်း စာရေးခြင်း နဲ့သာတိုင်းတာလေ့ ရှိတဲ့ ငယ်ဆရာတယောက် ရှိခြင်းဟာ ကံကောင်းခြင်း တခုပါဘဲ။ ကျနော် ဆရာ ဦးအုန်းဟာ အရေးအခင်းတခုမှာ ကိုးကိုးကျွန်းပို့ ခံရပါတယ်။
ကျနော်တို့ကို စာသင်တဲ့အချိန်မှာ ကိုးကိုးကျွန်း ကပြန်ခါစထင်ပါတယ်၊ နောက်တော့ ၈လေးလုံး အရေးအခင်း မှာ တခါ ထောင်ထဲကို ၀င်ရပါတယ်၊ အဲဒီက ပြန်လာတဲ့ အချိန်မှာ တော့ ဦးအုန်းတော်တော် စိတ်ဓာတ် ကျ သွားတယ်ထင်ပါတယ်၊ အရက်တွေတော်တော်သောက်လာပါတယ်၊ ကျန်းမာရေးလည်း သိတ်မကောင်း တော့ ပါဘူး၊ ကဗျာဆရာ တယောက် နဲ့ နောက်ဆုံးတခေါက် အိမ်ကိုလာလည်သွားတဲ့ အချိ်န်က ကျနော်တို့ နောက်ဆုံးတွေ့ လိုက်ပါတယ်၊ နောက်တော့ လူကြုံ့ နဲ့ ဦးအုန်းအတွက် စာတစောင် ပါးပေး လိုက်ပါတယ်။
ဦးအုန်းက စာဖတ်ပြီးတော့ မျက်ရည်ကျတယ် လို့ ပြောပါတယ်၊ နောက်ပြီးတော့ စာရေးဘို့စာဖတ်ဘို့ မှာလိုက်ပါတယ်။ ဦးအုန်း ရဲ့ တပည့်က သေမှဘဲ စာမဖတ်တော့မှာပါ၊ စိတ်ချပါ ဦးအုန်း။ မဂ္ဂဇင်း တွေပေါ်မှာ တော့ အခြေအနေပေးရင် တပည့် ရဲ့စာတွေ တွေ့ရမှာပါ၊ ဦးအုန်းရဲ့ ကဗျာလေး တွေကိုတော့ မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာ တွေ့တိုင်း ၀မ်းသာအားရ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အုန်း (အုန်းမြင့်လှိုင်) ကျန်းမာ ပါစေ၊ အသက်ရှည်ပါစေ။
Posted by SHWE ZIN U at 2:31 AM2comments Links to this post
[UCSY] For your consideration & knowledge
သင် - စ, လုံး ပြောင်းပြီးသွားပြီလား?၊ ပြောင်းပြီးသွားယင်-တော့ဒီစာကိုလုံးဝရှေ့ ဆက်မဖတ်ပါနဲ. ။ ဒီစာရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က - စလုံးမပြောင်းရသေး သော်လည်း ပြောင်းယင် ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတဲ့ သူများ အတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က စင်္ကာပူမှာ နေ - နေတဲ့မြန်မာ ပီအာ တစ်ယောက်ပါ။ မြန်မာ ပီအာ အချင်းချင်း တစ်ဦးနဲ တစ်ဦး တွေ. ယင် နှုတ်ဆက် စကားပြောယင်၊ စ ,လုံးပြောင်းပြီးပြီလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မကြာခဏ ကြားနေရပါတယ်။ ယခု ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တဲ့ကိစ္စက မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်တို နိုင်ငံရေးကိစ္စတို နဲ လုံး ၀ မပါတ်သက်ပါ ဘူး။ မိမိတ စ်ဦးချင်းရဲ . ကိုယ်ကျိုး ကိစ္စကို စဉ်းးစားဘို ကိုပဲ ဆွေးနွေးပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို - မိတ်ဆွေအချို .က- သူတို . စ, လုံး ပြောင်းကြတယ်ဆိုတဲ .အကြောင်းရင်းကို အမျိုးမျိုး ပြောပြ ကပါတယ်။ အချို က တော့ ကျွန်တော့် အလုပ်က မကြာခဏ Oversea သွားရတယ်။ မြန်မာ ပတ်စ်ပို.ဆိုယင် ဗီဇာ ယူရ - တာ တစ်မျိုး၊ အမေရိကန် ဆိုယင် ဗီဇာ မရ တာက တစ်မျိုး၊ ဆိုတော့ စ လုံးပတ်စ်ပို.ပြောင်းမှ အဆင် ပြေမယ် ဆိုပြီး၊ ပြောင်းလိုက်တာ ”။ အချို ကတော့ “စ, လုံး ပြောင်းလိုက်ယင်၊ အစိုးရဆီက အိမ်ဘိုး ၃- သောင်း ရမယ်လေ၊ ဒါဆိုယင် အိမ် ၀ယ်ဘို့က အဆင်ပြေ သွားပြီ၊ ဒါကြောင့် ပြောင်းလိုက်တာ ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ပြောင်းလိုက်ကြတာ။ အချို့ ကတော့ ကျွန်တော်က အိမ်အဟောင်းကို ၀ယ်ထားတာ၊ နောက်ကျယင် Upgrading လုပ်ယင်၊ P.R ဆိုယင် - စ, လုံးတွေထက် ၄-၅ ဆ ပိုပေးရမှာ ဆိုတော့ ပြောင်းလိုက်တာ ” အချို့ကတော့ “ မြန်မာ ပတ်စ်ပို . ကိုင်ထားယင်၊ ဘာအခွင့်အရေးမှ မရပဲ၊ အခွန်ဆောင်နေရတာပဲ ရှိတယ်။ စ, လုံး ပြောင်းယင် ဒီအခွန်ပေးနေရတဲ့ မြန်မာ သံရုံးကို သွားစရာ မလိုတော့ဘူး၊ “ အချို . ကတော့ “ သားသမီးတွေက - ဒီမှာပဲ အခြေချကြမှာ ဆိုတော့ ပြောင်းလိုက်တာ ကာင်းပါတယ်ဆိုပြီး၊ ပြောင်းလိုက်တာ ”? စသည်ဖြင့် - စသည်ဖြင့် ပါပဲ။
ကျွန်တော် ဆွေးနွေးချင်တာ - ကျွန်တော်တို . ရဲ့ ဘ ၀ရှင်သန်ရပ်တည်မှု ရှုထောင့် Aမြင်၊ AရှုံးAမြတ် တွက်ကြည့် ဘို. အမြင်၊ ( မြင်တွေ . နိုင်တဲ့၊ မမြင်တွေ . နိုင်တဲ့ အကျိုး၊ အဆိုးတို . ကို ယှဉ်ပြပြီး ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို.ရဲ့ ဘ၀ ရှင်သန်ရပ်တည်မှု အမြင်။ ကျွန်တော်တို.တစ်တွေ ရေခြားမြေခြား မှာ လာရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းဟာ ကိုယ်တိုင်းပြည် အတွင်းမှာ-ကိုယ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ မရရှိမအောင်မြင်နိုင်လို. ရေကြည်ရာ မြက်နုရာကို ထွက်လာရတာလို. ဆိုယင် အားလုံးလက်ခံကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ - စားဝတ်နေရေးကြောင့် ထွက်လာကြသူတွေ အများအပြား ရှိသလို - ကျောင်းသားလူငယ်များ၊ ပညာရှင် များ အနေနဲ . တိုးတက်မှု မျှော်မှန်းမှု တွေ၊ အောင်မြင်မှု၊ စီးပွားရေး သမား တွေအတွက်က - ပြင်ပ ကမ္ဘာနဲ. အဆက်အသွယ် ရရှိပြီး အောင်မြင် ဘို. စသည်တို . ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုယင်
နံပါတ် (၁) Aနေနဲ .- မိမိကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်ကြဘို . လိုပါတယ်။ မိမိဘာကို တကယ် လိုချင်တာလဲ၊ ကွန်ပျူတာ စကားနဲ. ပြောယင် -System Requirement ကို ပရောဂျက် တစ်ခုလုပ် တဲ့ အခါမှာ - ယင်ဆုံးသတ်မှတ်ကြရပါတယ်။ အဲဒီ အဆင့်မှာ -Requirement တွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သေသေချာချာ Define လုပ်ကြရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက - မိမိလိုချင်တဲ့ အချက်ကို သေသေချာချာ မသိပဲ - Software တစ်ခုကို ရေးပြီးယင် - နောက်ဆုံးကြယင် - ပြန်ပြင်ဘို . ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ အားလုံးကို အစ -ကပြန်စကြရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ - ကျွန်တော်တို . မြန်မာ လူမျိုးတွေရဲ . အားနည်းချက်ကို မြင်ကြရပါလိမ့်မယ်။ သူများပြောယင် - အလွယ်တစ်ကူ ခေါင်းညိတ်တတ်ပြီး၊ မိမိကိုယ်တိုင် အသေအချာ လေ့လာမှု နည်းပါးတဲ့ အချက်ပါ။ နောက်ပြီး မှ -မီးစင်ကြည့်က တတ်တဲ့သူကို တော်တယ်လို . အသိအမှတ် ပြုပြီး၊ လေ့လာသုံးသပ် တတ်သူ အမြှော်အမြင် ရှိသူ တို . ကို အထင်မကြီး တတ်တဲ့ ကျွန်တော်တို . မြန်မာ လူမျိုးများဟာ ဥပဒေ စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စကို နားမလည် လို . အလိမ်ခံ ကြရတာ၊ မိမိက အမှန်ဖြစ်ပါလျှက်နဲ . အမှုရှုံးရတာ၊ ရုပ်ရှင် ဗွီဒီယို သရုပ်ဆောင်များက ဇတ်ကားတွေကို ပါးစပ်ချုပ် ချုပ်ပြီး နောက်ဆုံး ခရီးစရိတ်၊ အ ၀တ်အစား ဘိုးတွေမှာ ဘယ်သူက အကုန်အကျခံရမှာ လဲမသိလို . အငြင်းပွား ရတတ်တာ - စသည်ဖြင့် လက်ရှိနိုင်ငံတကာမှာ - အရေအတွက် အများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ အချို . ဆိုယင် - ငါ့မှာ ပိုက်ဆံရှိယင် ပန်းရံနဲ . လက်သမားကို ခိုင်းပြီး ဆောက်မယ် ဆိုပြီး ဒီဇိုင်းပုံ မရှိပဲ အိမ်ဆောက် လို . နောက်ဆုံးမှာ - ကိုးလိုးကန်. လန် . အိမ်ကြီးနဲ . နပမ်းလုံးနေရတာတွေကို - မိမိရဲ့ ပါတ် ၀န်းကျင်မှာ အလွယ်တကူ တွေ့  နိုင်ပါတယ်။ မိမိမှာ သင့်တော်တဲ့ အရည်အချင်း မရှိပဲ - ပွဲစားကို ငွေပေးပြီး နိုင်ငံခြား ဖြစ်ယင် ပြီးရောနဲ . ထွက်လာလို . ဒုက္ခအကြီးအကျယ် တွေ . နေတဲ့သူတွေကို ယိုးဒယား၊ မလေးရှားမှာ သိန်းနဲ . ချီပြီး တွေ . နိုင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ - နဂိုစကားကို ပြန်ကောက် ကြရအောင်။ ကျွန်တော်မှာ - ငွေမရှိယင်၊ ငွေရှိယင် ဘာမဆိုဖြစ်ပြီ လို . ထင်တတ်ကြတတ်။ တကယ် ငွေရှိတော့ရော ဖြစ်ပါ သလား။ တကယ်တော့ လူသားတွေရဲ . အဓိက - လိုအပ်ချက် တိရစ္ဆာန်တွေထက် ပိုလိုတဲ့ အချက် ဟာ စား ၀တ်နေရေးက လွဲယင် - မိမိ ဘယ်သူဆိုတာ Own identity ကိုတောင့်တတဲ့ အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက - လူက အရာရောက် ချင်တယ်။ သူများတကာရဲ .
အသိအမှတ်ပြုခံချင်တယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ချို . က ဘုရားဒကာ အလှူရှင် ဆိုတဲ့ နာမည် ခံရဘို . ၊ တစ်ချို .က “ ငါ့အဖေက ဘာရာထူးကွ “ ၊ တစ်ချို .က “ ငါ့ကို ဘာထင်နေလဲ “ စသဖြင့် မိမိ ဘယ်သူ ဆိုတာကို ဖော်ပြနိုင်ဘို . ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဒီအချက်ကို သိထားတဲ့ အာဏာရှိသူ အရာရှိများက - “ ဒီနယ်မြေမှာ ဆိုယင် - မောင်ရင့်ကိုပဲ အားကိုးရတာ “ ဆိုယင် သံဃာကိုတောင် ရိုက်ပုတ်ရဲတဲ့သူများ ပေါ်လာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေမှာ - ငွေပေးဘို . မလိုပါဘူး၊ အဲဒီ သူတွေ အထင်ကြီးထားတဲ့သူများက - ကျောသပ်ချီးမွမ်း မှုလေး ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
ဟုတ်ကဲ့ - အဲဒီတော့ ကျွန်တော့် လူသားတွေ ဘာလိုသလဲ ဆိုတာကို နားလည်လောက်ပါပြီ။
Page3Page3of 14
ကျွန်တော် တို . တစ်တွေ အပြာရောင် အိုင်စီကဒ်ကနေ - အနီရောင် အိုင်စီကဒ်ကို ပြောင်းကိုင်တဲ့ အခါမှာ -
စာရွက်ပေါ်မှာ - စ, လုံးဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါဆိုယင် ဒီမှာ လက်ရှိ - စ,လုံးတွေနဲ . တူသွားပြီလား။ သူတို .က- ကိုယ့်ကို အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခု ထဲမှာ ထည့်သွင်းလက်ခံလိုက်ပြီလား။ လက်ရှိ ရွှေစ လုံးတွေကို - ဒီကလူတွေက မင်းဘယ်တော့ ပြန်မှာလဲ မေးယင် - I’m Singaporean လို . ရဲရဲ မဖြေ ရဲကြပါ။ ဘာဖြစ်လို . ပါလဲ။ လက်ရှိ Aိမ်ရှင် Aုပ်စုတွေနဲ . ပေါင်းသင်း ကျင်လည်နေသလား၊ မိမိနဲ. နိုင်ငံတူ အသိုင်းအ၀ိုင်း ထဲမှာပဲ ကျင်လည်နေရပါသလား၊ နိုင်ငံသား မပြောင်းထားတဲ့ သူတွေဟာဧည့်သည်တွေပါ။ ဒီတိုင်းပြည် စီးပွားပျက်ယင် ဖြစ်စေ၊ ကပ်တစ်ခုခု ကျရောက်ယင် ဖြစ်စေ၊ မိမိ နိုင်ငံမှာ အခွင့်အလမ်း ပေါ်လာယင် ဖြစ်စေ၊ သူတို . အားလုံး အိမ်ပြန်သွားကြမှာပါ။ ဒါဆိုယင် - ဒီမှာပဲ အခြေစိုက်မယ် လုပ်ထားတဲ့ သူများအနေနဲ .ဒီက အိမ်ရှင်တွေကိုပဲ အပေါင်းအသင်းလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါ အပြင် နောက်တစ်ခုကတော့ - ဒီက လူတွေက အပြင်မှာ -နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား တွေကို ထောက်ခံ ပါတယ် လို .ပဲပြော ပြော၊ သူတို .ရဲ . ရင်ထဲမှာ -ဒီကောင် တွေဟာ အခွင့်အရေးသမား တွေလို. ရှိနေကြပါတယ်။ သူတို .တွေအလုပ်ရှိနေချိန်မှာ - ကိုယ်တို. ကို ထောက်ခံနေပေမဲ့ - သူတို .အလုပ်မရကြတော့တဲ့ အချိန်မှာ - သူတို . နေရာကို အခွင့်အရေးသမား - တွေ အောက်ဈေးနဲ . လာပြီး သူတို. အလုပ်ကို လုယူသွားတယ်လို . ခံစား ကြတယ် ဆိုတာကို နားလည်ထားပါ။ ဒီတော့ - ကိုယ်တကယ် ပျော်နိုင်ပါ့မလား။ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ။ ရှေးနှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းက ကျွန်တော်တို . လူသားများဟာ မိမိတို . ရဲ . စားဝတ်နေရေး၊ လုံခြုံရေးAတွက် တစ်နေရာက တစ်နေရာကို ရွှေ .ပြောင်း နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Aဲဒီတုန်းAခါက -ပါတ်စ်ပို .တို . ၊ ဗီဇာတို. မလိုခဲ့ကြပါဘူး၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေ တို . ဘာတို . သေသေချာချာ မရှိခဲ့ ကြပါဘူး။ အဆင်မပြေယင် - နောက်တစ်နေရာ ထပ်ရွှေ . ပြီး၊ မျိုးဆက်သစ်တွေကို မွေးဖွားလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ - အရေးအကြီးဆုံးက စား ၀တ်နေရေး က မရှိမဖြစ်ပါ။ အခု ကျွန်တော်ပြောချင်တာက - စင်္ကာပူဟာ အမှန် စင်စစ် ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ဖြစ်နေသလား ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်တမ်းက - စင်္ကာပူမှာ - သောက်ရေက အစဘာဆို ဘာမျှ သဘာဝ အရင်းအမြစ်မရှိပါ။ ကမ္ဘာ.ကုန်သွယ်မှု စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းမှာ - နေရာကောင်းရထား တဲ့ အတွက် ကြောင့် ၀င်ငွေကောင်းနေရခြင်းပါ။ ဟိုအစတုန်းက - အရှေ .တောင်အာရှဒေသမှာ -သူလို.မျိုး၊ နည်းပညာ၊ အရည်အသွေး ဘယ်သူမှ မရှိသေးချိန်၊ အခြားနိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှု မရှိသေးချိန်တွေကိုအခွင့်ကောင်း ယူပြီး ကြီးပွားလာရပါတယ်။ါပေမယ့် အခုဆိုယင် - အခြားနိုင်ငံတွေမှာ - သူထက် ကောင်းတဲ့၊ လုပ်အားခ၊ မြေနေရာငှါးခ၊ ဈေးသက်သာ တဲ့ ဆိပ်ကမ်းကြီးတွေ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းကြီးတွေ ဆက်တိုက် ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ အနောက် အုပ်စု၊ ဂျပန် အစရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေဟာ လုပ်အားခ သက်သာတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ရွှေ .ပြောင်း ဘို. အတွက် နေ.စဉ် ဆိုသလို -စင်္ကာပူက စက်ရုံတွေကို ပိတ်လာနေတာကို သတိထားမိသူတိုင်း သိနိုင် ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ပြောင်းများစွာ လုပ်လာခဲ့တဲ့ ကွန်တိန်နာ ရှစ်ပင်း လုပ်ငန်းကြီးတွေဟာ လည်း စင်္ကာပူက ထွက်ခွာနေပါပြီ။ ဒါတွေကို စင်္ကာပူ အစိုးရက ကြိုတင်သိထားတဲ့ အတွက် သူတို . နိုင်ငံကို ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနိုင်ငံကနေ - ၀ န်ဆောင်မှု နိုင်ငံအဖြစ် ပြောင်းဘို . ကြိုးစားလာရပါတယ်။ Resort တို . Casino ပျော်ပွဲစားလုပ်ငန်း၊ လောင်းကစားလုပ်ငန်း , Formula One ပြိုင်ကား လုပ်ငန်းတို . ကို တစ်ဘက်က လုပ်လာရသလို၊ Financial Hub, Medical Hub, Educational Hub, တို . လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဘို . စီအစဉ်တွေချလာရပါတယ်။ အဲဒီလိုမှ မကြံစည်ယင် စင်္ကာပူဟာ ကမ္ဘာမြေပုံမှာ မည်သူမျှ မသိနိုင်တဲ့ ကျွန်းကလေးအဖြစ်ကို ပြန်ရောက်သွားမှာကို အားလုံး သိကြ ပါတယ်။
၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း လီကွမ်ယု ပြောသလို - ကျွန်တော် တို . အစိုးရ အနေနဲ . အရည်အချင်း မရှိယင်၊ မင်းတို . သားသမီးတွေ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသွားသင်ကြရမယ်။ မင်းတို. မိန်းမတွေ အခြားနိုင်ငံမှာ Maid သွားလုပ်ကြရမယ်။ မင်းတို.၀ယ်ထားတဲ့ အိမ်တွေဟာ အခုတန်ဘိုးရဲ့ အစွန်းထွက်တန်ဘိုးတောင် ရှိမှာ မဟုတ်တော့ ဘူး ဆိုတာ သူချဲ. ကားပြောတာမဟုတ်ပါ။ အမှန်တကယ် ဖြစ်သွားမှာပါ - အဲဒီတော့ သူတို . လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်တဲ့ လုပ်လာရသလို၊ Financial Hub, Medical Hub, Educational Hub တို . ဟာ ကိုယ်သင်ကြား၊ လာခဲ့တဲ .
Aတတ်ပညာ၊ ကိုယ်လုပ်လာခဲ့တဲ့ အတွေ. အကြုံတွေနဲ . ဆက်စပ်လို . ရပါ သလား၊ တကယ်လို . ကိုယ်က လိုင်းပြောင်းပြီး လုပ်မယ် ဆိုယင်ရော - သူတို. အနေနဲ . လက်ခံနိုင်မလား ဆိုတာက စဉ်းစားရမယ့် အချက်တစ်ချက်ပါ။ တရုပ်ပြည်၊ အိန္ဒိယ တို . မှာ နည်းပညာတွေ၊ လူအင်အားတွေ ရှိနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေဟာ အဲဒီနိုင်ငံတွေကို နေ. တိုင်းပြောင်းရွှေ .နေပါတယ်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ - ကပ်ရောဂါတစ်ခု ကျရောက်ခဲ့ယင်ဖြစ်စေ၊ အကြမ်းဘက် ပေါက်ကွဲမှု ၊ လူမျိုးရေး Aထိကရုဏ်း တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ယင် ဖြစ်စေ၊ ယခုမြင်တွေ .နေရတဲ့အနေအထားနဲ . အင်မတန်ကွာခြားတဲ့ စင်္ကာပူ ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကပ်ရောဂါ၊ အကြမ်းဘက်မှု၊ လူမျိုးရေး အထိကရုဏ်း တွေကို စင်္ကာပူအစိုးရအနေနဲ. အလွန် ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ တစ်ဘက်ကလည်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို ထိန်းထားနိုင်ဘို . မက်လုံးတွေ ပေးထား ရပါတယ်။ အမှန်က စင်္ကာပူဟာ - လေဆန်ရေဆန်ကို လှော်ခတ်နေရတဲ့ ရွက်လှေငယ် လေးတစ်စင်း ပါ- သတိ ၀ီရိယလျှော. လိုက်တာနဲ . နောက်ကြောင်းကို ချက်ခြင်းဆိုသလို ပြန်ရောက်သွားမှာကို အလုပ် လုပ်နေတဲ့ သူတွေ သိထားကြပါတယ်။ သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြည့်ကြွယ်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ - စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ ပြဿနာများ ပေါ်ခဲ့ယင်၊ ရက်အနည်းငယ် အတွင်းမှာပဲ နလံထူနိုင်တယ် ဆိုတာ အိန္ဒိယ မွန်ဘိုင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပြီး နောက်နေ . မှာ မူလအတိုင်း လူတွေ အသွားအလာမပျက်တဲ့ အခြေအနေများကို သက်သေခံနေပါတယ်။ ဒီအချက်များကို သိထားကြတဲ့ နိုင်ငံကြီးသား များဖြစ်တဲ့ ပြည်ကြီးတရုပ်များ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား တရုပ်များ၊ အိန္ဒိယ များ၊ ဟာ စင်္ကာပူ ပီအာ အဖြစ်မှာတင် ရပ်ထားကြပြီး၊ စလုံးနိုင်ငံသား အဖြစ်ကိုပြောင်းသူ ၂- ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို . မြန်မာများကတော့ စလုံးပြောင်းသူဟာ ပီအာ အရေအတွက် ရဲ . တစ်ဝက်မကတော့ပါ။ ကျွန်တော်တို. အနေနဲ . အိမ်တစ်အိမ်ဆောက်တော့မယ် ဆိုယင် - ဆောက်မည့်နေရာက မြကြီး နေအထား ကို လေ့လာရပါမယ်။ မြေပျော.၊ ရွှံ.မြေ ဖြစ်နေခဲ့ပြီး။ သတိမထားပဲ ဆောက်လိုက်ယင် -အားလုံး ပြိုပျက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ - အချို.သော အမေရိကန် နိုင်ငံသားများ -စင်္ကာပူ နိုင်ငံသား ပြောင်းတာကို သတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။ အဖြေက ဘာများပါလဲ။ Uပမာ- ၂-ခု ပေးချင်ပါတယ် မကြာခင်က ဟယ်လီကော့ပတာ ပျက်ကျသေဆုံးသွား တဲ့ Chemoil ကုမ္ပဏီရဲ့ .ပိုင်ရှင်၊ CEO ဖြစ်သူ Robert Chandra ဆိုယင် သူAနေနဲ .ရေနံAရောင်းA ၀ ယ် လုပ်သူဖြစ်တဲ့ Aတွက်ကြောင့် Aမေရိကန်နိုင်ငံသား ဆိုလျှင် - Aီရတ်ရေနံကို ၀ ယ်လို .မရတဲ့Aတွက် မပြောင်းမနေ ပြောင်းရခြင်း ဖြစ်သလို။ မကြာသေးခင်က နိုင်ငံသားပြောင်းလိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသား ဂျက်လီ ဆိုလျှင် - ၁၉၈၀ နှစ်များမှာ Aမေရိကန် နိုင်ငံသား ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ယခုပြောင်းလိုက်ရတာက - Aမေရိကန် Aစိုးရရဲ့ . Aခွန်Uပဒေ ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ၄၀% ၀င်ငွေခွန်ဆောင်ရတဲ့ Aမေရိကန်ရဲ့ ၀င်ငွေခွန် Uပဒေဟာ ယခင်က Aမေရိကန် နိုင်ငံမှာ Aလုပ်လုပ်သူများသာ Aကြုံး ၀င် တဲ့ Aတွက်ကြောင့် - ချမ်းသာတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ရုပ်ရှင်မင်းသားများဟာ ပြင်ပ ထုတ်လုပ်သူ များနဲ့
Aမေရိကန် ပြင်ပမှာ စာချုပ်ချုပ်ခြင်းဖြင့် ၀င်ငွေခွန် မပေးရေAာင် ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ယခု Uပဒေ Aသစ်Aရ
- Aမေရိကန် နိုင်ငံသား ဖြစ်လျှင် ဘယ်နေရာမှာပဲ လုပ်လုပ် ၀င်ငွေခွန်ပေးရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို .
ရဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသော ၀ င်ငွေခွန်ကို သက်သာ ဘို . က Aမေရိကန် နိုင်ငံသား ဘ၀ ကို စွန် .ရပါလိမ်မယ်။
လက်ခံရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်။ ကျွန်တော် တို . ကို လက်ခံရခြင်းရဲ့ ပထမဆုံး Aကြောင်းရင်းက -လုပ်Aား Aတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယက လူမျိုးရေး ဟန်ချက်ညီဘို. ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယက ၂၀၀၁ နှစ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေး ကပ်ကြောင့် ဆောက်ထားတဲ့ တိုက်ခန်း AများAပြား ၀ယ်သူ မရှိတော့ ပါဘူး ။ ဒီနေရာ Aခြား နိုင်ငံတွေမှာ ဆိုယင် - ပုဂ္ဂလိက ဆောက်လုပ်သူ ဟာ သူရဲ .ငွေကို ဖြစ်တဲ့ နည်း နဲ . ပြန်ဖေါ် နိုင်ဘို . Aတွက် ဈေးလျော့ခြင်း၊ ငှားခြင်း ဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်ရပါတယ်။ ဒီမှာ တော့ တိုက်ခန်း တွေဟာ Aစိုးရပိုင် ဖြစ်တဲ့ Aတွက် - ဈေးကို လျော့ချမည့် Aစား၊ Demand ကို Aပြောင်းAလဲ ဖြစ်ေAာင် နိုင်ငံခြားသား တွေကို Aိမ် ၀ယ် ခွင့် ရေAာင် ခေါ်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေကို Aိမ် ၀ယ်ခွင့် ရတဲ့ တစ်ဘက်က ပီAာ တွေ ပေးပစ်သလို၊ 4-Room တွေကို နဂိုက လူပျိုလူလွတ် စ , လုံး တွေ ၀ ယ်ခွင့် မရခဲ့ပေမယ့် ၀ ယ်လို . ရေAာင် စည်းမျU်း ပြောင်းပစ်လိုက်ပါတယ်။
ပထမAချက် - သူ . နိုင်ငံAတွက် ကာယ၊ Uာဏ လုပ်သားတွေကို လိုAပ်နေပါတယ်။ သူတို .နိုင်ငံသား တွေဟာ
Aန္တရယ်ကြီးတဲ့ နေရာတွေမှာ မလုပ်လိုတဲ့ Aတွက်၊ လုပ်ရလျှင်လည်း တစ်ခုခုဖြစ်လျှင် လျော်ကြေးပေးရမှာ ဖြစ်တဲ့ Aတွက် - သင်္ဘောကျင်း လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာ - ဈေးပေါပြီး၊ ကျန်မာရေး၊ Aသက်Aာမခံကို သိပ်ဂရုစိုက် ပေးစရာ မလိုတဲ့ မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ Aိန္ဒိယ အလုပ်သမားတို . ဟာ မရှိမဖြစ်ပါ။ ခန္ဓာ Aစိတ်Aပိုင်း တစ်ခု ပြတ်တောက် သွားခဲ့ပေမယ့်၊ သင့်တော်တဲ့ လျော်ကြေး မရပဲ ပြည်တော်ပြန်သွားရတဲ့ နိုင်ငံခြားသား တွေ Aများကြီးပါ။ ဒုတိယ Aချက်က - ရုတ်တစ်ရက် သိပ်မမြင်သာပါဘူး၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရတဲ့Aချိန်တုန်းက တရုပ်လူမျိုးက ၈၀% လောက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စင်္ကာပူနိုင်ငံကို ကြီးပွားရေး Aတွက် ကိုးစားနေကြရတဲ့ ကာလ တွေအတွင်းမှာ -ကလေးမွေးကို သွယ်ဝိုက်သော အားဖြင့် ပိတ်ပင် တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၀- နှစ်လွန်ကာလ တွေမှာ - တတိယ မွေးတဲ့ကလေးကို မိမိAိမ်နဲ . နီးတဲ့ကျောင်းမှာ တက်ခွင့်မရေAာင် လုပ်ခဲ့ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် မူဆလင်ဘာသာ ၀ င် မလေး လူမျိုးတွေက သားသမီး ရခြင်းကို တားမြစ်ခြင်း မရှိတဲ့ Aတွက် - မလေး နဲ . ၊ တရုပ် AရေAတွက် Aချိုး ဟာ Aနှစ်လေးဆယ် ကာလမှာ သိပ်မကွာတော့ပါဘူး။ မလေးရှား ရဲ့ Aစွန်းထွက်၊ ကျွန်းငယ် ဖြစ်သလို၊ Aင်ဒိုနီးရှားရဲ့ ၀ န်းရံထားခြင်းကို ခံနေရတဲ့ စင်္ကာပူမှာ - စုစုပေါင်း လူUီးရေမှာ -မလေး Aချိုးကို လျှော့ပစ်ဘို . လိုလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် Aခြားနိုင်ငံခြားကို ဖြည့်သွင်းတာ ဖြစ်ပေမယ့် -မလေးရှားက မလေးတွေAနေနဲ .- စင်္ကာပူမှာ - Aလုပ်လာရှာဘို . မလွယ်သလို - စင်္ကာပူ တရုပ်တစ်ယောက်နဲ .Aိမ်ထောင် ကျတဲ့ မလေးရှား မလေး Aမျိုးသမီးကို စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ပေးဘို . Aလွန် . လွန် ခက်ေAာင် လုပ်ထား ပါတယ်။ ဒီAချက်ကို စင်္ကာပူ နိုင်ငံသား မလေးလူမျိုး တွေ - ခံစားသိနေကြပေမယ့် - Aချိန်Aခါ မတိုင်သေးတဲ့Aတွက် သူတို . မြိုသိပ်နေကြပါတယ်။ ဒါဟာ - ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း တရုပ်Aားကို ဖြည့်ဘို .- Aဓိက - Aားဖြင့် ပြည်ကြီး တရုပ်လူမျိုးကို ခေါ်သွင်းနိုင်ဘို . Aတွက် S- pass ဆိုတာကို စတင်ပြဌာန်းလိုက်ပါတယ်။ နဂိုက Work permit, Employment pass စသဖြင့် တ်မှတ်ထားတဲ့ Aတွက် - Work permit တစ်ယောက် ကို PR ပေးဘို . က ခက်ပါတယ်။ Employment pass ကို Eligibility Criteria တွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ Aတွက် Aများစု ၀ င်လာမယ့် ပြည်ကြီးတရုပ်ကို Employment
pass ပေးဘို . က ခက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Employment pass ဆိုလျှင် ၂- နှစ်နေပြီးမှ PR လျှောက်ခွင့်
သတ်မှတ်ထားခဲ့ တဲ့Aတွက်၊ Aမြန်Aဆန် PR ပေးဘို . လည်း လွယ်၊ Eligibility Criteria တွေ လျှော့ချ ထားတဲ့
S-pass ကို စတင်လိုက်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ - Internet ကနေ Aလွယ်တကူ ဗီဇာ လျှောက်နိုင်ပြီး တရုပ်ပြည်မှာ တွင် ဗီဇာကို Collect လုပ်နိုင်တဲ့ နေရာပေါင်း ၃၀- ကျော် သတ်မှတ် ပေးလိုက်ပါတယ်။ PR ပေးပြီးယင် - လူတွေကို နိုင်ငံသား Aဖြစ်ပြောင်းလာေAာင် - ကျုံးသွင်း ဘို . ဖြစ်တဲ့၊ PR ခံစားခွင့်တွေကို လျှော့ချ လိုက်ပါ တယ်။ ဒါတွေကို တစ်ဆင့်ချင်း လုပ်သွားပေမယ့် မလုပ်ခင် ကတည်းက AစီAစU် AတိAကျ ရှိထား ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ . တရုပ်Aရေ Aတွက် Aချိုးပမာဏ တိုးတက်ဘို . လုပ်တာဖြစ်ပေမယ့် -
ပြည်ကြီး တရုပ်တွေ ထဲက - သိပ်သုံးလို . မရတဲ့ Aနှိပ်သည်၊ ပြည် .တန်ဆာ၊ ကားသမား၊ Hawker Center
Aလုပ်သမား တွေလောက်သာ နိုင်ငံသား ဖြစ်သွားပြီး၊ ပညာတတ် တရုပ်များက - ၂- မျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ ပထမ တစ်မျိုးက PR Aနေနဲ . သာ ရပ်တည်နေကြပြီး၊ ဒုတိယ တစ်မျိုးက Aနောက်နိုင်ငံတွေကို ဆက်သွားလိုသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ Aမျိုးဟာ စလုံးနိုင်ငံသား ဖြစ်သွားတာနဲ . Aမေရိကန် H1 ဗီဇာကို Aလွယ်တကူ ယူပြီး Aမေရိကန်ကို သွား၊ Aစိမ်းရောင်ကဒ်ပြား ကိုင်ဆောင်သူများ ဖြစ်သွားပါတယ်။ စုစုပေါင်း တရုပ်လူမျိုးရဲ့ ၂% လောက်ပဲ စ ,လုံးပြောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ Aိန္ဒိယ တွေလည်း ဒီပမာဏ လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
ထောင်တာက ယုန်ပါ။ မိသွားတကာ ကြောင်ပါ။ ထောင်တုန်းက တရုပ်လူမျိုးများကို ထောင်တာ ဖြစ်ပေမယ့်၊
မိသွားတာက မြန်မာ များဖြစ်ပါတယ်။
တတိယ Aချက်က တော့ Aထက်မှာ ဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စ , လုံး Aစိုးရ Aနေနဲ . - ပထမ Aချက် ၃- ချက်Aပြင် ထပ်ရသွားတဲ့ AကျိုးAမြတ် Aပိုဆု တွေကတော့ - - ကလေးများ - သူတို . လူမျိုးတွေ - မမွေးတဲ့ ကလေးတွေကို ကျွန်တော်တို . က သယ်ဆောင်လာကြတယ်။ - Uာဏ်ပညာရည်စွမ်း - ရုတ်တစ်ရက်မမြင်နိုင်တဲ့ Aချက်ပါ။ ကျွန်တော်တို . မြန်မာ ပညာတတ် Aများစုက မွေးတဲ့ ကလေးတွေဟာ Uာဏ်စွမ်းရည်Aားဖြင့် ဒီက လူတွေရဲ . ကလေးတွေထက် မြင့်မားကြတယ် ဆိုတာ သတိပြုမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ Uာဏ်စွမ်းရည် ဟာ မျိုးရိုးလိုက်တတ်တာမို .- ပညာတတ် မြန်မာက မွေးတဲ့ ကလေးတွေဟာ - မင်းဆိုင်မှာ လုပ်တဲ့၊ ကားဒရိုင်ဘာ လုပ်တဲ့ စ , လုံး ကလေးတွေ ထက်သာပါတယ်။ - CPF- ဒါက ထင်ထင်ရှားရှား ရလိုက်တဲ့ AကျိုးAမြတ်ပါ။
Aရှုံး Aမြတ်၊ (၁- ကျန်းမာရေး Medical benefit)
ကမ္ဘာမှာ ဖွံ .ဖြိုးတိုးတက်ပြီး - နိုင်ငံ လို . ကျေငြာထားတဲ .နိုင်ငံတွေမှာ - သူ . တို . နိုင်ငံသား တွေAတွက် Aလုပ်လက်မဲ့ ထောက်ပံ့ကြေး၊ သားသမီး Aနည်းAများAလိုက် ထောက်ပံ့ကြေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့ကြေး ဆို .တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ Aစိုးရ Aနေနဲ .သူ . Aိပ်ထောင်ထဲက စိုက်ပြီး - ပြည်သူတွေAတွက် ကူညီကြရပါတယ်။ လူတွေAတွက် AရေးAကြီးဆုံးက ကျန်းမာရေး ကူညီမှုပါ။ ကနေဒါမှာ
သြစတျေလျမှာ - ဆိုယင် - နိုင်ငံသား တွေAတွက် ကျန်းမာရေး ကို Aစိုးရက လုံးလုံးလျားလျား စိုက်ထားပါတယ်။ စင်္ကာပူဟာ ငွေကြေး AနေAထားAားဖြင့် နိုင်ငံတော် Aရန် ဘဏ္ဌာ Aများဆုံး ကမ္ဘာ . နိုင်ငံ တွေထဲမှာ -ထိပ်ဆုံး မှာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီAရန်ငွေကြေး ဟာ ပြည်သူ ပြည်သားများ နဲ . လုံးလုံးလျားလျား မဆိုင်ဘူး ဆိုတာ - ပြီးခဲ့တဲ့ စီးပွားရေး ပြဿနာ ကိစ္စတွေမှာ သတိထားကြည့်လျှင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးရုံတွေဟာ နှစ်စU် မိမိတို . Aတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Aရောင်းလျာထားချက် Sales Budget ကို ပြည့်မီေAာင် ကြိုးစား ကြရပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတွေရဲ . Aဓိက ရည်မှန်းချက်ဟာ ငွေကြေး AကျိုးAမြတ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နားလည် လက်ခံနိုင်ပေမယ့် Aစိုးရ ဆေးရုံတွေကပါ - နှစ်စU် AကျိုးAမြတ် ဖြစ်ထွန်း နေတဲ့ Aချက်ဟာ သူတို က ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံလို . Aထင်သေး ပြောဆိုနေတဲ့ Aင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း နိုင်ငံတွေက ဆေးရုံတွေ လောက်တောင် မွန်မြတ်မှု မရှိပါဘူး။ သတင်း Aမှောင် ချထားလို. Aပြင်ပိုင်း Aမြင်ကောင်း နေတဲ့ စ , လုံး ဆေးရုံတွေရဲ Aမှား တွေ၊ ငွေမရှိတဲ့ ကင်ဆာ ရောဂါဝေ ဒနာသည် Aတွက် စမ်းသပ်မှု တွေဟာ - ဆေးရုံ လောက Aတွင်းသတင်းတွေကို သတိထား လေ့လာ ယင် သိနိုင်ပါတယ်။ ငွေကြေး Aလွန်ချမ်းသာယင် - Aကောင်းဆုံး ဆေးရုံမှာ Aကောင်းဆုံးဆရာ တွေနဲ . Aသက်ကို ဆွဲဆန် . နိုင်တာမှန်ပေမဲ့ - ၀ န်ထမ်း ဘ ၀ မှာ သာ Aများစု ရှိနေတဲ့ ပြည်သူ တွေAတွက်က တော့ တကယ့် ဒုက္ခ ပင်လယ်ပါ။ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ရပ် တစ်ခုမှာ - လုပ်ငန်းေAာင်မြင် နေတဲ့ သားသမီး - ၃- ယောက်ဟာ Aရေးပေါ် ဌာနမှာ Aသက်လု နေရတဲ့ AမေAတွက် ၆- လ လောက် ငွေနဲ . ရင်းကုသ ပြီးနောက် - နောက်ဆုံးငွေကြေး မတတ်နိုင်ကြတော့ တဲ့ Aတွက် လက်လျှော့ လိုက်ကြ ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စU် တစ်ရပ်ပါ ။ ICU မှာ - ၆- လ လောက်ထားပြီး၊ Treatment တွေAတွက် - Diagnosis တွေAတွက် ၊ သီးသန် . ပေးရတဲ့ ကုန်ကျ စရိတ်ကို မှန်းကြည့်ပါ။ သားသမီး ၃- ယောက် စလုံးရော - မိခင် ဖြစ်သူပါ - စ, လုံး စစ်စစ်တွေပါ။ နောက်ဆုံးမှာ တော့ မိခင်ဟာ - သေတာပါပဲ။ ငွေကြေးAကျိုးAမြတ် ရသွားတာက ဆေးရုံပါ။ ဒီနေရာမှာ - တစ်ခြား နိုင်ငံ တစ်ခုခု - က ဆေးရုံဖြစ်လျှင် - မိခင် သေဆုံးတာခြင်း တူနိုင်ပေမယ့် လူနာရှင် တွေရဲ . Aိပ်ထောင်ထဲက ငွေကို ဒီက ဆေးရုံတွေလောက် နှိုက်သွားမှာ မဟုတ်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို လို . လွန်ခဲ့တဲ့ ၅-၆ လ လောက်က သတင်းစာမှာ - စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ သက်ကြီးရွယ်Aို တွေရဲ့ ၇၀% ဟာ သူတို . Aနေနဲ . လိုAပ်တဲ့ ပုံမှန် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု Regular Medical Check up မလုပ်တဲ့ Aတွက် Aရေးပေါ်ဌာနကို ထပ်ဖန် တစ်လဲလဲ တက်နေကြရတယ်လို . ရေးထားပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ - ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု လုပ်လိုက်လို . ရောဂါတစ်ခု ကို တွေ . ယင် - ကုသနိုင်ဘို . ဒီလူကြီးတွေမှာ ငွေမရှိကြပါဘူး၊ Aစိုးရကလည်း နာမည်ခံ စိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် တကယ် မစိုက်ပါဘူး။ သူတို . ရဲ့ သားသမီး တွေကိုလည်း ဒုက္ခမပေး ချင်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း မကြာသေးခင် ကာလ တွေမှာ - ဆေးစစ်ပြီး ပြန်လာတဲ့ သက်ကြီးရွယ်Aိုတွေ - ရထား လမ်းပေါ် ခုန်ချခဲ့ကြရတာပါ။ Aစိုးရစိုက်ထုတ်မှု - ဒီနေရာမှာ - ကျွန်တော် ပြောချင်တာက - Aချို . ပြောနေကြတဲ့ စ , လုံးဖြစ်ယင် Aစိုးရက စိုက်ပေးတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ပြောချင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က Today သတင်းစာမှာ - လူတစ်ယောက်က တွက်ချက်ပြထားပါတယ်။
တစ်ခု စာမြေနေရာ Aတွက် Land Lease လို . ခေါ်တဲ့ မြေငှားခ ၉၉- နှစ် ကို တွက်၊ နောက်ထပ် piling
ကုန်ကျ စရိတ်ကို တွက်၊ ပြီးယင် ဆောက်လုပ်ရေး ကုန်ကျမှုကို တွက်၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု Aတွက် Aတိုးတွက်ကို
တွက်၊ Aားလုံးစာရင်း ပေါင်းလိုက်ယင်၊ HDB တိုက်ခန်း ၄- ခန်း တစ်ခုကို ငွေ ၅- သောင်းနဲ . ရောင်းယင်ကို မြတ်နေ ပါပြီ၊ ဒါကို Aစိုးရ ကိုယ်တိုင်က ၃- သိန်း ရောင်းတာဟာ ဘာဖြစ်လို .ပါလဲ၊ HDB ရဲ့ တစ်နှစ်တာ ငွေစာရင်း AရှုံးAမြတ်ကို ပြည်သူ လူထုကို သိရေAာင် ပြောပြပါလို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို HDB က တာ ၀ န်ရှိသူက ပြန်လည် ဖြေဆိုချက်က - ဒီကိစ္စကို ဒီလို တွက်လို . မရပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို . လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို . ဆောက်ပေးတာက - Home ပါ House မဟုတ်ပါဘူးလို . ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ၅- သောင်းတန်တဲ့ တိုက်ခန်း ကို ၃- သိန်းလို . ဈေးတင်၊ ၃- သောင်းကို စ , လုံးAတွက် Aစိုးရက စိုက်ပေးတယ် လို . လုပ်ထားတာပါ။ ဒါကလည်း လူတိုင်းကို စိုက်ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိသားစု ၀ င်ငွေ စုစုပေါင်း တစ်လကို ၈၀၀၀ မကျော်မှ ပါ။ ဒီကိစ္စကို ကြည့်လိုက်ယင် - နောက်ထပ် ကိစ္စတွေ ဖြစ်တဲ့ HDB upgrading, နဲ . ဆေးရုံကိစ္စတွေမှာ - ကိုယ့်ရဲ. လစာ ၀ င်ငွေနဲ . ၊ ဆေးရုံ တက်တဲ့ Aဆင့်Aတန်း ပေါ်မူတည်ပြီး စိုက်ပေးတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို သဘောပေါက်မယ် ထင် ပါတယ်။ Medisave Accont ကနေ ပေးလို . ရတယ် လို . ပြောင်းလိုက် တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ - ဆေးရုံစရိတ်ကို ၃- ဆ တင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကို လူကြီးပိုင်း စင်္ကာပူ တွေ သိကြပါတယ်။ Aခု ကုန်တိုက်တွေမှာ - Discount 50% , ဆိုပြီး၊ မူလ ဈေးကို Sticker မှာ ပြင်ပြီး၊ ပြန်ရောင်း တာဟာ - Aဆန်းမဟုတ်ပါ။ ဘ၀ ကို Aရွယ် ၃- ပိုင်း ပိုင်းလိုက်ယင် - ကျွန်တော်တို . ဟာ ဒုတိယ Aရွယ်ထဲရောက်နေပါပြီ။ တတိယ Aရွယ်မှာ မလွှဲ မရှောင်သာတဲ့ Aိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း တို . ကို သိပ်မကြာခင် ရင်ဆိုင်ရပါတော့မယ်။ ဒါကြောင့်မို . လို .- ကျွန်တော်တို . သာ ဒီမှာ နေယင် - စောစောက ပြောလိုက်တဲ့ ဒီက Aသက်ကြီးသူတွေ ရဲ
. AခြေAနေနဲ . ဘ၀ ကို နှစ်Aနည်းငယ် Aတွင်း ရောက်ရှိပါတော့မယ် ဆိုတာကို သတိပြုကြပါ။
Aရှုံး Aမြတ်၊ (၂) CPF
လက်ရှိ Aားဖြင့် မလေးရှားကနေ - စင်္ကာပူနိုင်ငံကို နေ . စU် AသွားAပြန် လုပ်ပြီး Aလုပ်လာ လုပ်နေတဲ့ လူUီးရေဟာ ၈- သောင်းကျော် ရှိပါတယ်။ ဒီAထဲမှာ - PR Aဖြစ်နဲ . နေ နေတဲ့ မလေးရှား တရုပ်တွေ မပါသေးပါဘူး၊ Aလုပ်လုပ်နေတဲ့ နေရာ - Aားလုံးမှာ မလေးရှား တရုပ်တွေ AရေAတွက်ဟာ Aလွန်မျာါးတယ်။ ဒါကြောင့် မလေးရှားပါတ်စ်ပို . ကိုင်ထားတဲ့ မလေး တရုပ် PR တွေ Aနေနဲ . သူတို . ရဲ . PR ကို စွန် . လွှတ်ပြီး - မလေးရှား ပြန်မယ် ဆိုယင် -Sabah, Salawak စတဲ့ Aရှေ . ဘက် မလေးရှား East Malaysia က သူတွေ ဆိုယင်တော့ သူတို . ရဲ့ CPF ကို ချက်ခြင်း ထုတ်လို . ရပေမယ့်၊ Aနောက် မလေးရှား ခေါ်တဲ့ Aဓိက မလေးရှား ဘက်က လာတဲ့ သူတွေကို တော့ ၂- နှစ် ဆိုင်းငံ့ပြီးမှ ထုတ်လို . ရပါတယ်။ ဘာကြောင့် လဲ ဆိုတော့ Aနောက် လေးရှားက Aများစု ဖြစ်နေလို .- ဒီငွေကို ချက်ခြင်း ထုတ်ပေးလိုက်ယင် - သူတို . တိုင်းပြည်ရဲ . ငွေ Aမြောက် Aများ ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ် Aထိ ကျွန်တော်တို . မြန်မာ PR တွေ Aနေနဲ . ကိုယ် PR လကို စွန် လွှတ်ယင်၊ CPF ကို ချက်ခြင်း ထုတ်လို . ရပါသေးတယ်။ ဒါလိုလုပ်ယင် - Aနိုင်နဲ .ပိုင်းပြီးသွားတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်လို . ဒီနိုင်ငံက သိပ်လိုလား တဲ့ AနေAထား မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိAားဖြင့် စ , လုံး နိုင်ငံသား တွေAနေနဲ . ၂၀၀၇ မတိုင်မီက Aသက် ၆၂- နှစ် ပြည့်ယင် - CPF ကို ပြန်ထုတ်လို . ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၇- သြဂုတ်လမှာ - National Day မှာ ၀ န်ကြီးချုပ် လီရှင်လုံးက ၆၂- ကနေ ၆၅ နှစ်ကို ၂၀၁၂ က စပြီး ပြောင်းဘို ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ေAာက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ Aပြည့်AစုံကိုေAာက်က ပေးထားတဲ့ Link မှာ ကြည့်လို . ရပါတယ်။ http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporelocalnews/view/294907/1/.html
ဒီနေရာမှာ - နောက်တစ်ခု သိထားဘို .က CPF Minimum Sum (Ordinary + Special A/c) Aနည်းဆုံးပမာဏ ကို ပြောင်းလိုက်တာပါပဲ။ Aသက် ၅၅- နှစ် ပြည့်ပေမယ့် လူတစ်ယောက်ရဲ . CPF Special Account MediSave Account တွေမှာ Aနည်းဆုံး ထားရမယ့် ပမာဏ မပြည့်သေးယင်၊ သူ .ရဲ . Ordinary ccount ကနေ Aလိုလို ဆွဲယူမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြောင်းလိုက်တဲ့ - Special Account ရဲ . Aနည်းဆုံး ရှိရမယ့် ပမာဏ ဟာ - တစ်သိန်း ၂- သောင်း ဖြစ်ပြီး၊ MediSave Account ရဲ . Aနည်းဆုံး ရှိရမယ့် ပမာဏ ဟာ -၃- သောင်း ၂- ထောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီUပဒေဟာ ၂၀၁၃- မှာ စတင် Aသက် ၀ င်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက - Aဲဒီနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ - Aသက် ၅၅- နှစ်ပြည့် တဲ့သူ ဖြစ်တဲ့ Aတွက် ကြောင့် Aခုကာလ လူလတ်ပိုင်း ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော် တို . Aားလုံး ဒီAထဲမှာ Aကျုံး ၀ င်နေပါတယ်။ Uပမာ - ကိုယ် ၀ ယ်ထား တဲ့ Aိမ်ဘိုးကို Aခု လောလောဆယ် မှာ CPF ကနေ ပေးလို . ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၅၅- နှစ်ပြည့် တဲ့ Aချိန်ကျယင် - Special Account မှာ ၁၂၀,၀၀၀ မပြည့်ယင်၊ MediSave Account မှာ ၃၂,၀၀၀ မပြည့်ယင် - လက်ရှိ Aိမ်ဘိုးAရစ်ကျ ပေးနေတဲ . Ordinary Account ကငွေ တွေကို Minimum Sum Aဖြစ်
Page 11 Page 11 of 14
သက်ဆိုင်ရာ Account ကို ကွန်ပျူတာကနေ Aလိုလို ပြောင်း လိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ AဲဒီAခါကျယင် - ကျန်နေတဲ . Aရစ်ကျပေးငွေကို မိမိAိပ်ထောင်ထဲက ငွေသားနဲ . ပဲ ပေးရပါတော့မယ်။ Aခု ကျွန်တော်တို . ရတဲ့
၀ င်ငွေကို CPF Calculator မှာ တွက်ကြည့် ပြီး၊ စုစုပေါင်း ငွေ ၁- သိန်း ၊ ၅ သောင်း ၂ ထောင် ကို ပြည့်နိုင်လား တွက် ကြည့်သင့်ပါတယ်။ Aနည်းဆုံး ပမာဏ မပြည့်မီယင် - ၅၀၀၀ က လွဲလို . ထုတ်ယူခွင့် မပြုတော့ပါဘူး။ ဒီစာသားလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
After 1 January 2013, CPF members who reach 55 can withdraw the balances in their Ordinary and
Special Accounts only after setting aside the CPF Minimum Sum and the Medisave Minimum Sum.
However, the first $5,000 can be withdrawn even if the Minimum Sum requirement is not met.
Aပြည့်AစုံကိုေAာက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။
ဒါက CPF website
မှာ ရှိနေတဲ့ ငွေကို ဆေးရုံမှာ နောက်ဆုံးသေဆုံး ချိန်Aထိ ထုတ်ယူခြင်း မပြုနိုင်ပါဘူး။ ကုန်ကျတဲ့ စရိတ်ကို ဆေးရုံက မစိုက်ရေAာင် - ကျွန်တော်တို . ကို ငါးကြင်းဆီ နဲ . ငါးကြင်း ပြန်ကြော်ထား ထားပါ။ Aဲဒီတော့ Aနိုင်နဲ
. ပိုင်းမလား၊ ဆင်သေကောင် နောက်ကို ဆက်လိုက်ကြမလား ဆိုတာ ကို ဆုံးဖြတ် ကြ ဘို . သင့်ပါတယ်။
Aရှုံး Aမြတ်၊ (မမြင်ရသော ဆုံးရှုံးမှုများ )
နိုင်ငံခြား ရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာများဟာ မြန်မာ့ ရိုးရာ၊ မြန်မာ့ ဓလေ့ တွေကို လွမ်းနေတတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လောက် ပဲ ဘိုစိတ် ဆန်တဲ့ သူပဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ သားသမီး တွေကို သံယောဇU်ထားမှု၊ Aုပ်ချုပ်မှု၊ စာင့်ရှောက်လိုမှုမှာ - မြန်မာ ဆန်ချင် တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်း တွေမှာ - ဗုဒ္ဓဘာသာ U်ကျေးမှု သင်တန်းတွေ တက်ဖြစ်ေAာင် မိဘ Aချို . က ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေး တွေကို တကယ်တမ်း လွှမ်းမိုးတာက ကျောင်း နဲ . သူ . ရဲ . Aသိုင်း A ၀ိုင်း ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို မိဘ တွေAနေနဲ . လျှော တွက်ထားမိတတ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းက သိပ္ပံ နည်းပညာ ဆိုတဲ့ စကားကို Aထပ်ထပ်ပြော တဲ့ ကျောင်းရဲ . သင်ခန်းစာ တွေကို ရလာပြီးတဲ့ နောက်မှာ - ကလေးတွေဟာ နိဗ္ဗာန် ဆိုတာ၊ မြင့်မိုရ်တောင် ဆိုတာကို ယုံလာကြပါUီးမလား၊ မိဘက ရိုက်နှက်ယင် တရားစွဲလို . ရတယ် လို . ကျောင်းက သင်ပေးလိုက်ပြီး တဲ့Aခါမှာ - မိဘရဲ့ စေတနာနဲ . ဆုံးမမှုကို သူတို . လက်သင့် ခံနိုင်ပါတော့မလား၊ ကိုယ်Aနေနဲ . မတတ်နိုင်လို
. ထွက်ခွာလာတဲ့ရတဲ့ တိုင်းပြည်ကို - ကလေးတွေက တတိယ နိုင်ငံ၊ ဆင်းရဲသား တိုင်းပြည် လို . ပြောနေတတ်ကြပြီလေ။ Aသက်ကြီးလာယင် - မိမိနဲ . Aကျွမ်းတ ၀င် ဖြစ်တဲ့ နေရာဟောင်းကို လွမ်းလို . ရပါ့မလား Aသက်ကြီးလာယင် - ကိုယ်နဲ . ပြောမနာ ဆိုမနာ မိတ်ဆွေတွေကို တောင့် တမိပေမယ့်၊ သူတို . နဲ .
တွေ . နိုင်၊ ပြောဆို နိုင်ပါ့မလား၊ တိုက်ေAာက်မှာ ဘီယာ တစ်ပုလင်း ကို Aဖော်လုပ်နေရတဲ့ စင်္ကာပူ သက်ကြီး ရွယ်ကြီးတွေ . ကို တော့ နေ. တိုင်း တွေ . နိုင်ပါတယ်။ သားသမီး Aားကိုးရမလား။ ဒီနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ ဘ၀ မှာ
-လူတိုင်းဟာ ဘ၀ တိုက်ပွဲကို Aကြိတ်Aနယ် ယှU်နွှဲနေကြရပါတယ်။ သားသမီး တွေဟာ လည်း သူတို . ရဲ . ဘ၀
ရပ်တည်မှု Aတွက် နေ . စU်နှင့် Aမျှ ရုန်းကန် နေကြရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃- နှစ်က သတင်းစာ ထဲမှာ ပါတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ - လူလတ်တန်းစား AနေAထားနဲ . သားသမီး တွေကို ဆရာ ၀ န် ဖြစ်ေAာင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ စင်္ကာပူ လူမျိုး တစ်ယောက်ဟာ - သူ . ရဲ . လူလတ်ပိုင်း AနေAထားမှာေAာင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ . ပဲ သားသမီးတွေ ဆရာ ၀ န် ဖြစ်၊ သူလည်း Aနားယူ လိုက်ပြီး၊ ဘ ၀ ကြီးကို ငြိမ်းချမ်းပြီလို . ယူဆမိပေမယ့် - သားသမီး တွေ Aနေနဲ .က- ဒီနိုင်ငံမှာ ဆရာ ၀ န်လုပ်ယင်- ၀ င်ငွေAလွန်နည်းတာကို သိလာကြပါတယ်။ နှစ်စU် ဆရာဝ န် တွေ မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ နောက်မှာ - ဆရာ ၀ န် AရေAတွက် က များလာတော့ Aစိုးရ ဆေးရုံမှာ လုပ်ယင်လည်း ၀ င်ငွေက နည်းနည်းပဲ ရမယ်။ ကိုယ်ပိုင် ဆေးခန်း ဖွင့်ရေAာင်လည်း Aရင်းAနှီး ကလိုသေးတယ်။ ဒါနဲ . ပဲ သားသမီး တွေက သြစတျေလျမှာ Aလုပ်လုပ်ဘို . စီစU်ကြပါတယ်။ ဒါဆိုယင် -
ဒီAစိုးရကို လျော်ဘို . ငွေက လိုလာပါတယ်။ ကျွန်တော် မှတ်မိ သလောက်က ၂- သိန်းလား မသိဘူး၊ ဒီပမာဏကို လျော်ဘို . မိဘကို AကူAညီ တောင်းတော့ - ဖခင် ဖြစ်သူက ၅- ခန်းAိမ်ကို ရောင်း၊ Aခန်း သေး
၀ယ်ပြီး ပိုတဲ့ ငွေနဲ . လျော်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ တစ်ခြား ဟိုကိစ္စ၊ ဒီကိစ္စတွေ Aတွက် လိုလာပြန်တာမို .သူ . ရဲ . CPF ငွေကို ထုတ်ပြီး ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ. ပဲ - သားသမီး တွေ Aခြားနိုင်ငံမှာ Aလုပ်သွားလုပ်၊ Aိမ်ထောင်ကျ သွားကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းက မိဘ ဆီက ကြီးကြီးမားမား တွေ တောင်းပြီးတာနဲ . ပြန်ပေးရ မှာကို သားသမီးတွေက မေ့သွားတတ်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ - Aသက် ၇၀ Aရွယ်မှာ - သူ . Aနေနဲ . စားသောက်ဆိုင် တွေမှာ - သန့် ရှင်းရေး Aလုပ်ကို လုပ်ရတဲ . Aဆင့် ရောက်သွားပါတယ်။
Aိမ်ပြန်လို. ရမလား၊ AလိုAလျောက် နိုင်ငံသား Aဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်း။
Aချို .က- ဆိုကြပါတယ်။ “ နိုင်ငံသား ပြောင်းထားလည်း ဘာဖြစ်လဲ၊ ငါတို . မှာ မှတ်ပုံတင် ရှိနေတာပဲ။ ကိုယ့်ရပ်ကွက် ထဲ မှာ - မှတ်ပုံတင် နဲ . နေယင် ဘယ်သူ သိမှာ မို . လို . လဲ “ တဲ့။ Aင်မတန် စိုးရိမ် စရာ ကာင်းတဲ့ AတွေးAခေါ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို လဲ ဆိုတော့ - နိုင်ငံသား Aဖြစ်ပြောင်း ထားလိုက်ကတည်းက - နိုင်ငံခြားသား ပါတ်စ်ပို . ကိုင်ပြီး - ရန်ကုန် လေဆိပ်ကို ၀င်လာကတည်းက - လ.၀.က Aနေနဲ .- နိုင်ငံခြား တစ်ယောက် မြန်မာပြည် ထဲ ၀င်လာတယ် ဆိုပြီး စာရင်း သွင်းလိုက်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို . မြန်မာ တွေAနေနဲ . Aကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှု နဲ . တကယ့် Aုပ်ချုပ်မှု ယန္တရား လည်ပါတ်နေမှုကို ခွဲခြား နားလည် ထားဘို . လိုပါတယ်။ လာဘ်စား တဲ့ လ .၀.က ၀ န်ထမ်းတွေဘက်က - တခြမ်း၊ Aုပ်ချုပ်မှု ယန္တရား တည်ဆောက်ထားမှုက တစ်ခြမ်းပါ။ ၁၉၇၄- မှာ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ - မိန်းဖရိမ် ကွန်ပျုတာကို စတင် သုံးစွဲ တဲ့ဌာနက ၂- ခု ပဲ ရှိပါတယ်။ တစ်ခုက - လ.၀. က နဲ . နောက်တစ်ခုက် C.S.O လို . ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံတော် စာရင်းချုပ်ရုံးပါ။ ဆိုလိုတာက - Aစိုးရ Aနေနဲ . လ.၀. က ကိစ္စကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထား တာမဟုတ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသား Aနေနဲ . မြန်မာ ပြည်ထဲ ၀ င်လာပြီး ပြန်Aထွက် မရှိဘူးဆိုယင် - လ.၀. က Aနေနဲ . သိနေပါတယ်။ ဒါကို ငွေပေးပြီး ဖြေရှင်း မယ်ဆိုယင် - မဖြစ်နိုင်ဘူးလို . မဆိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်ရုံးချုပ်ကနေ၊ သက်ဆိုင်ရာ မြို . နယ်Aထိသာမက၊ လ .၀. က၊ ရဲ၊ ထောက်လှမ်းရေး စသည်ဖြင့် ဌာနပေါင်းစုံ Aထိ ဆက်စပ်နေတယ် ဆိုယင် - ပေါ့သေးသေး မဟုတ် တော့ ပါဘူး။ မြန်မာပြည်ထဲမှာ
- F.R.C လို . ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်၊ Eည့်နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင် ကိုင်ထားတဲ့ လူတွေ Aနေနဲ . ဘယ်ကိုသွားသွား သက်ဆိုင်ရာကို Aကြောင်းကြားရတယ်။ Aခက်Aခဲ Aများကြီး ရှိတယ် ဆိုတာ - သက်ဆိုင်သူတွေ သိကြပါတယ်။ Aခုကိစ္စက - ဒီထက် Aဆများစွာ - ပြင်းထန် ပါတယ်။ လက်ရှိAားဖြင့် Aခြာိးုင်ငံတစ်ခု ရဲ . နိုင်ငံသား ဖြစ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ - တရားမ ၀ င် ရက်လွန်ပြီး နေတယ် ဆိုခြင်းဟာ - Aကျယ်ချဲ . ယင် ချဲ . သလောက် ပြဿနာ ကြီးမားပါတယ်။ ဟုတ်ပြီ - ဒီတော့ ဒီလိုမလုပ်ဘူး၊ ပါတ်စ်ပို .နဲ . ပြန်မ ၀ င်ဘူး။ ယိုးဒယား နယ်စပ်ကနေ ပြန်ခိုး ၀ င် မယ်ဆိုယင်လည်း -ေAာင်မြင် ချင်လည်းေAာင်မြင်မယ်။ေAာင်မြင်လို . Aထဲရောက်ပြန်တော့ လည်း - Aကြောင်းသိသူက ဖေါ်လိုက်ယင် - AကြီးAကျယ် ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီAချိန်ကာလမှာ - ကိုယ်Aနေနဲ . Aရွယ် ရှိသေးယင် တော်ပါ သေးတယ်။ Aရွယ်ကြီးရင့်ပြီး - ၀ င်ငွေမရှာနိုင် တဲ့ AနေAထား မှာ ဆိုယင် Aသက်ကြီးပိုင်း မှာ ကြုံတွေ . ရမယ့် ပုံမှန်လောက ဓမ္နတာထက် Aများကြီး ဆိုးတဲ့ AခြေAနေကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
နောက်Aရေးကြီးတာ တစ်ခုက -မြန်မာနိုင်ငံသားကို စွန် . လွှတ်ပြီးကတည်းက တရား ၀ င်Aားဖြင့် ပြန်ရဘို . လမ်း မရှိတော့ပါဘူး။ လ.၀. က Uပဒေကို နောင်ဘယ်Aစိုးရပဲ တက်တက်၊ လွယ်လွယ်ကူကူ ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်
လိုက်လို.မရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ Aခွင့်ကောင်းကို စောင့်နေတဲ့ Aခြား နိုင်ငံခြားသားတွေ နေရာ ၀
င်ယူသွားယင်၊ မြန်မာပြည်သား စစ်စစ်တွေ ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တာလည်း ဖြစ်သလို၊ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကိစ္စလည်း ဖြစ်နေလို .ပါ။ စင်္ကာပူ နိုင်ငံရဲ . Uပဒေကလည်း သူ . နိုင်ငံသား ပင် ဖြစ်လင့်ကစား - Aခြား နိုင်ငံတစ်ခု ခုမှာ နေထိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးကို ဆက်သွယ် မှု (၅) နှစ်Aတွင်း မလုပ်ခဲ့ဘူး ဆိုယင် - သူ . နိုင်ငံသား Aဖြစ်က Aလို Aလျောက် ပယ်ဖျက်ပစ်ပါတယ်။ေAာက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ Weblink ကို ကြည့်ပါ။ http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi-bin/cgi_getdata.pl?actno=1999-REVED- CONST&doctitle=CONSTITUTION%20OF%20THE%20REPUBLIC%20OF%20SINGAPORE%0A& date=latest&method=part
နိုင်ငံသား Uပဒေ၊ Aပိုဒ်
မှာေAာက်ပါ Aတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆိုလိုတာက Registration ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ Naturalization ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စင်္ကာပူ နိုင်ငံသား Aဖြစ်ကို ရယူထားသူ
တစ်Uီးဟာ စင်္ကာပူ ၀န်ထမ်းလည်း မဟုတ်၊ စင်္ကာပူ Aစိုးရ ရဲ. Aဖွဲ.Aစည်းတစ်ခုခုက လည်း မဟုတ်၊ စင်္ကာပူ
သံရုံးကို လည်း ဆက်သွယ်မှု မလုပ် - ပါပဲနှင့် Aခြားနိုင်ငံ တစ်ခုခု မှာ ၅-နှစ် ဆက်တိုက် နေခဲ့လျှင်- စင်္ကာပူ
နိုင်ငံသား Aဖြစ်မှ ရပ်စဲ ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။
လူတစ်ယောက် နိုင်ငံပျောက်ဆုံးခြင်း ဆိုတဲ့ ဒုက္ခဟာ ဘယ်လောက် ကြီးမားတယ် ဆိုတာကို- မကြုံဘူးသူတွေ
နားမလည် ကြပါဘူး။ မြန်မာပြည်က ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစုတွေဟာ Aကောင်းဆုံး Uပမာ တစ်ခုပါ။
ကျွန်တော် တစ်ခုပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ တကယ်လို.- Aခု ဒီစာကို ဖတ်နေသူဟာ ဒေါ်လာ သန်းချီပြီ စီးပွားရေး လုပ်နေသူ ဆိုယင်- ဒီနိုင်ငံဟာ တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဘေးကင်း လုံခြုံမှု နဲ. တကွ- ကမ္ဘာနဲ. Aချိန်ပြည့် ဆက်သွယ် ပြီး Aလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ Aတွက် Aလွန် Aဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Aလုပ်လုပ်မှ- ရပ်တည်နိုင်မယ့် သူတွေ. Aနေနဲ. Aသက်ကြီးပိုင်း AလားAလာကတော့- Town Council မှာ သွားAလုပ်တောင်း ရပါလိမ့်မယ်။ သန်.ရှင်းရေး Aလုပ်၊ ကုန်တိုက်တွေမှာ- လAသီးAရွက်တွေ ထုပ်ပေးတဲ့ Aလုပ်စသဖြင့် ရကောင်း ရပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို. - ဒီနိုင်ငံဟာ- နောက်နိုင်ငံသား Aဖြစ်ကို စွန်.စရာ မလိုတဲ့ Dual Citizenship ကိုလက်ခံယင်၊ Aလုပ်လက်မဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးတွေ၊ Aသက်ကြီးပိုင်း ထောက်ပံ့ ကြေးတွေ ပေးမယ် ဆိုယင်တော့- မိတ်ဆွေ ချက်ခြင်းပဲ နိုင်ငံသား ပြောင်းလိုက်ပါ။ ဒါမှ မဟုတ်ယင်တော့-
Posted by SHWE ZIN U at 10:22 AM0comments Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်သော အဆိုတော်၊ ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ဦးဇော်ဝမ်းသည် ဩဂုတ်လ (၁၂)ရက်နေ့ ည (၈း၃၀)နာရီခန့်က ရန်ကုန်မြို့သီရိစန္ဒာဆေးခန်းတွင် အသည်းရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ မန္တလေး ရီမြင့် ရုပ်ရှင် မှ ရိုက်ကူးသော သင်္ကြန်မိုး ဇာတ်ကားတွင် သင်္ကြန်မင်းသားကြီးအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း သီချင်းရေးဆရာ ကိုမောင်မောင် (မန္တလေး/ကွယ်လွန်) ၏ သင်္ကြန်သီချင်းများ ဖြင့် တဖန်နာမည် ပိုမိုကျော်ကြား လာစေခဲ့သည်။
ဇော်ဝမ်းသည် တခေတ်တွင်တယောက်ဟု ပြောကြားရလောက်အောင် နာမည်ကြီး ခဲ့သူ တဦး ဖြစ်သည်။ သူ့ခေတ်သူ့အခါက ဇော်ဝမ်း သီဆိုခဲ့သော ကျောက်ခဲ သီချင်းသည် ထိုခေတ်လူငယ်တို့ ၏ပါးစပ်ဖျား တွင် အထူးရေပန်းစားခဲ့သည်။
ထို့နောက် မူးရစ်ဆေးဝါးမှု့ ဖြင့်အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ ထောင်မှ လွတ်သောအခါတွင် သင်္ကြန်သီချင်း များဖြင့် ပြန်လည် ကျော်ကြားခဲ့သည်၊ သင်္ကြန်ပွဲတော်များတွင် ဇော်ဝမ်း၏ သီချင်းများ မပါလျှင် သင်္ကြန်မပီပြင်ဟု ထင်ရသည့် အထိအောင်မြင်ခဲ့သည်။ မန္တလေးသင်္ကြန်၊ မြို့မတီးဝိုင်း နှင့် ဇော်ဝမ်း တို့သည် သင်္ကြန်၏ အမှတ်တံဆိပ်များ ဖြစ်သည် ဟုထင်ရလောက်အောင် ပြန်လည် ကျော်ကြားလာခဲ့ပါသည်။
ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် (၆၄)နှစ်ရှိခဲ့ ပြီဖြစ်သည်။
writer - szo
ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် မျိုးချစ်သူ / ၁၃ သြဂုတ် ၂၀၀၉
သင်္ကြန်မိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် နာမည်ကြီးသော သင်္ကြန်မင်းသားကြီး ဇော်ဝမ်း အသက် (၆၄) နှစ်သည် ယမန်နေ့ သြဂုတ် (၁၂) ရက် ည (၈) နာရီခွဲခန့်အချိန်က အင်းစိန်မြို့နယ် သီရိစန္ဒာဆေးခန်းတွင် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း ၎င်း၏ မိသားစုဝင်တဦးက ပြောသည်။
“အသည်းရောင်တာ ကြာပါပြီ။ သူ့မှာက အသည်းရောဂါရှိတာပါ။ အရင်တုန်းက အရက်တွေ အလွန်အကျွံသောက်ခဲ့တာကိုး။ အဲဒီဒဏ်တွေပေါ့လေ” ဟု ဇော်ဝမ်းနှင့် အနုပညာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တဦးက ပြောသည်။
“ဇော်ဝမ်းဟာ စေလိုရာစေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက ကျောက်ခဲသီချင်း ကို သီဆိုခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း သူအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ပြောရရင် ကျော်ဟိန်းထက် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားအဖြစ်နဲ့ ပရိသတ်က သိခဲ့တာပေါ့” ဟု အသက် (၇၀) ခန့်ရှိ ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းဂျာနယ်တခုမှ သတင်းထောက်ဟောင်းကြီးတဦးက ပြောသည်။
ဇော်ဝမ်းသည် စေလိုရာစေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှ ကျောက်ခဲသီချင်းဖြင့် အောင်မြင်လာခဲ့ရုံမက လူ့မနော၊ နေထွက်သောည၊ ရွှေသမက် ငွေသမက်၊ တို့နှစ်ယောက်နှင့်မိငြိမ်းချမ်း၊ ပလက်ဖောင်းမင်းသား၊ ပုစ္ဆာဆန်သောမိန်းကလေးနှင့် ဘယ်သူပြိုင်လို့ လှပါတော့နိုင် ဇာတ်ကားများဖြင့် ပရိသတ် စွဲလမ်းနှစ်သက်သော သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယခု သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံတွင် ရုံတင်ပြသနေသော မင်းလူ၏၀တ္ထုဖြစ်သည့် အချစ်ဟုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ခြင်းမရှိစေရ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွင် အကယ်ဒမီကျော်သူ၊ ကွယ်လွန်သူ အကယ်ဒမီထွန်းထွန်းနိုင်တို့နှင့်အတူ သရုပ်ဆောင်ထားသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
“သင်္ကြန်မိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ဇာတ်ဝင်သီချင်းတွေနဲ့ ထိန်းထားခဲ့တဲ့အတွက် အဲဒီဇာတ်ကားဟာ ဇော်ဝမ်းကို ပိုပြီးအရောင် ထွက်စေခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတကားဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်” ဟု သရုပ်ဆောင်ညီဂျော်က ပြောသည်။
အကယ်ဒမီဇင်ဝိုင်းကလည်း “သူဟာ စိတ်ကောင်းရှိတယ်။ လူငယ်ဆန်ဆန် ပျော်အောင်နေတတ်တယ်။ ကလေး၊ လူကြီးမရွေး ပေါင်းသင်းတတ်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ရဲ့အနုပညာဟာ သူသေပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မသေပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီ မျိုးသန္တာထွန်းက “ကျမကတော့ သူ့ရဲ့ ရှာပုံတော်မင်းသားကြီးသီချင်းကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ လူတွေကတော့ အားလုံးသေရမှာပါပဲ။ စောတာနဲ့ နောက်ကျတာပဲ ကွာတာပါ။ သူ့အနုပညာအတွက်တော့ နှမြောမိပါတယ်” ဟု ဇော်ဝမ်းအတွက် ၀မ်းနည်းစကားဆိုသည်။
ဇော်ဝမ်းအား ကြိုက်နှစ်သက်သူ ပရိသတ်များကမူ သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း သူ့ကို သတိရကြဦးမည်ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
ဇော်ဝမ်းသည် ရှုမ၀ ဦးကျော် ရုပ်ရှင်သင်တန်းမှ အစ်ကိုဖြစ်သူ မောင်တင်ဦးနှင့်အတူ ပေါ်လာသည့် အနုပညာရှင်တဦး ဖြစ်ကြောင်း ရုပ်ရှင်လောကအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် လူသိများသည်။
ဇော်ဝမ်း၏ရုပ်အလောင်းကို သြဂုတ် ( ၁၆) ရက်တွင် ရေဝေးသုသာန်၌ မီးသဂြုင်္ိဟ်မည်ဖြစ်ကြောင်း နာရေးကူညီမှုအသင်း၏ ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
မင်းသားကြီး ဇော်ဝမ်း ကွယ်လွန်
ဓာတ်ပုံသတင်း - မိုးမခ ဒေ့ါကွန် သြဂုတ် ၁၃၊ ၂ဝဝ၉
သင်္ကြန်မင်းသား၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် ဇော်ဝမ်း (အသက် ၆၄ နှစ်)သည် ယမန်နေ့ ည ၉ နာရီခန့်က အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိက ဆေးခန်းတခုတွင် ကွယ်လွန်သွားသည်။ ဇော်ဝမ်းသည် ပြီးခဲ့သည့်လ ၂ဝ ရက်နေ့က အသက် ၆၄ နှစ် ပြည့်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ မောင်တာ ဖြစ်သောကြောင့် ရင်းနှီးသူများက ကိုတာ၊ ကိုတာကြီး ဟု ခေါ်ကြသည်။ မန္တလေးဇာတိ အနုပညာရှင် ဇော်ဝမ်း၏ မိဘများမှာ တိုင်းချစ် သခင်သိန်းဖေ၊ ဒေါ်မြမြတို့ ဖြစ်သည်။
မန္တလေးမြို့ တိုင်းချစ်ကျောင်းတွင် ၁ဝ တန်းအထိ ပညာသင်ယူခဲ့သည်။ ကျောင်းကပွဲများ၊ ဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ မိုးကေသီ အပျော်တမ်းတူရိယာအဖွဲ့တည်ထောင်သူ ဦးဘိုခင် ထံတွင် အဆို၊ အတီး ပညာများ လေ့လာလိုက်စားခဲ့သည်။ ထိုတီးဝိုင်း၏ ပင်တိုင်အဆိုတော်အဖြစ် နာမည် ရခဲ့သည်။
အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့သို့ သွားရောက်ကာ ရှုမဝဦးကျော်ထံတွင် သရုပ်ဆောင်ပညာ သင်ယူလေ့လာခဲ့သည်။ “စေလိုရာစေ” ဇာတ်ကားမှာ ဇော်ဝမ်း ပထမဆုံး ပါဝင်ခဲ့သည့် ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် အစ်ကိုဖြစ်သူ ဒါရိုက်တာ မောင်တင်ဦး စီစဉ်သည့် နာမည်ကျော် သင်္ကြန်မိုး ဇာတ်ကားတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
ဇနီးဖြစ်သူမှာ ဒေါ်စိန်စိန်ဖြစ်ပြီး သားသမီး ၃ ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။
[ ကိုးကားချက် - နေထွတ် ပြုစုသည့် မန္တလေးအဘိဓာန်၊ စာ ၁ဝ၅ ]
ရှာပုံတော် မင်းသားကြီး ဇော်ဝမ်း ကွယ်လွန်
Thursday, 13 August 2009 17:35 အေးလဲ့
နာမည်ကျော် သင်္ကြန်မင်းသား၊ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဇော်ဝမ်းသည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည ၈နာရီခွဲ အချိန်ခန့်က အစာအိမ် သွေးကြော ပေါက်မှုကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ သီရိစန္ဒာ ဆေးရုံ၌ ကုသမှု ခံယူစဉ် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်း မိသားစုဝင် တဦးက ပြောသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၆၄ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
မင်းသားကြီး ဇော်ဝမ်းသည် ဘဝကို အပူအပင် ကင်းမဲ့စွာဖြင့် ကျော်ဖြတ်ခဲ့သည့် အနုပညာရှင် တဦး ဖြစ်ကြောင်း ဒါရိုက်တာ ကြည်စိုးထွန်းက ပြောသည်။
“သူက တကယ်ကို လူချစ်၊ လူခင် များတဲ့ သရုပ်ဆောင် တယောက်ပါ၊ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ပျော်ပျော် ပါးပါး၊ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး နေသွားတာပါပဲ။ စိတ်ညစ်တယ် ဆိုတာကို မသိတဲ့ သဘောမျိုးပဲ။ သူ ကူညီစရာ ရှိရင်လည်း ကူညီတယ်၊ သူ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီ ရှိရင်လည်း ယူသွားတယ်” ဟု ဒါရိုက်တာ ကြည်စိုးထွန်းက ပြောသည်။
ဇော်ဝမ်းသည် ရှုမဝ ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေးမှ ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်၏ သရုပ်ဆောင် သင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ရုပ်ရှင်လောကထဲသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဇော်ဝမ်းနှင့် ခေတ်ပြိုင် အနုပညာသည်များထဲတွင် သရုပ်ဆောင် ဆွေဇင်ထိုက်လည်း ပါဝင်သည်။
“ရှုမဝရုပ်ရှင်မှာ စပြီးတော့ သူကလည်း ခေါင်းဆောင်မင်းသား၊ ကျမကလည်း ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး လုပ်ပြီး သရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်လာကြတာပေါ့နော်၊ ကျမ မြင်တာတော့ သူဟာ ဘဝကို ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်ပါပဲ” ဟု သရုပ်ဆောင် ဆွေဇင်ထိုက်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ က “စေလိုရာစေ” ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားမှ “ကျောက်ခဲ” ဟု အမည်ရသည့် သီချင်းကို သီဆိုခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သရုပ်ဆောင် ဇော်ဝမ်းသည် အဆိုတော် အဖြစ်လည်း လူသိများခဲ့ကြောင်း ဆွေဇင်ထိုက်က ပြောပြသည်။
၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်း ထင်ရှား ကျော်ကြားလာချိန်တွင် ဇော်ဝမ်းသည် မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် ထောင်ကျခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သရုပ်ဆောင်ပညာတွင် ထူးချွန် ထင်ရှားသော်လည်း ဦးဇော်ဝမ်းသည် ကွယ်လွန်ချိန် အထိ အကယ်ဒမီဆု ဟု ထင်ရှားသည့် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု မရရှိခဲ့ပေ။
ဇော်ဝမ်းသည် အစ်ကိုဖြစ်သူ ဒါရိုက်တာ မောင်တင်ဦး ရိုက်ကူးခဲ့သည့် နာမည်ကျော် သင်္ကြန်မိုး ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွင်လည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
သူသည် ရုပ်ရှင် ဗွီဒီယို ကားပေါင်း ၁၅ဝ ကျော်တွင်လည်း သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ တေးစီးရီးပေါင်း ၁၅ဝဝ ကျော်တွင် ပါဝင် သီဆိုခဲ့ကြောင်း သူ၏ မိသားစုဝင်တဦးက ပြောသည်။
သူ၏ သင်္ကြန် သီချင်းများမှာ နာမည်ကျော် လူကြိုက်များခဲ့ပြီး နှစ်စဉ်၊ နှစ်တိုင်း သင်္ကြန်တေး စီးရီးများ ထုတ်ဝေ၊ သီဆိုခဲ့သည်။ “ရှာပုံတော် မင်းသားကြီး” အမည်ရ သီချင်းသည် သူ၏ သင်္ကြန်သီချင်းများထဲတွင် အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်သည်။
သရုပ်ဆောင် ဇော်ဝမ်း၏ ကြွင်းကျန်ရစ်သော ရုပ်ကလာပ်ကို လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ရေဝေး သုသာန်၌ သဂြိုင်္ဟ်မည် ဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်တဦးက ပြောသည်။
ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် 13 August 2009
သင်္ကြန်ဆိုရင် သူမပါရင်မပြီးလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ အကယ်ဒမီ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ဇော်ဝမ်းဟာ အသည်းရောဂါနဲ့ သြဂုတ်လ ၁၂ရက် မနေ့ ညပိုင်းက ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
“ကိုးနာရီကလေ ဆုံးသွားတာပါ။ အင်းစိန်က ဆေးခန်းမှာပဲ။” မင်းသား ဇော်ဝမ်းရဲ့ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ စေလိုရာစေ ဇာတ်ကားမှာ အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ဆွေဇင်ထိုက် ပြောသွားတာပါ။
ကွယ်လွန်ချိန်မှာ မင်းသား ဇော်ဝမ်းဟာ အသက် ၆၄နှစ်ရှိပါပြီ။ မန္တလေးမြို့မှာ ၁၉၄၅ခုနှစ်က မွေးဖွားခဲ့တဲ့ မင်းသား ဇော်ဝမ်းရဲ့ ဖခင်ကတော့ တိုင်းချစ် ဦးသိန်းဖေဖြစ်ပြီး အစ်ကိုကတော့ အကယ်ဒမီရိုက်ရှင်ဒါရိုက်တာ မောင်တင်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေကို အတူတူလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံရောက် ဒါရိုက်တာ အကယ်ဒမီ ၀င်းဖေကို မင်းသားဇော်ဝမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေများ အမှတ်တယ ပြောစရာရှိပါသလဲလို့ ကိုကျော်အောင်လွင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့
“သူမင်းသား မဖြစ်ခင် မှတ်မှတ်ယယ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်ဟာ ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလို့ သူက မေးတယ်။ ကျွန်တော်က သူ့ကို သေသေချာချာ ကြည့်ပြီးတော့ မင်း ရုပ်ရှင်မင်းသား မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ နောက်သိပ်မကြာခင် လပိုင်းအတောအတွင်းမှာကိုပဲ သူက အောင်မြင်တဲ့ ရုပ်ရှင် ပညာသည် ဖြစ်လာတယ်။ ဖြစ်လာတော့ သူကလည်း ကျွန်တော့်ကို မဖြစ်ဘူးပြောတာ အခု ဘယ့်နှယ့်တုန်းဆိုတော့။ ကျွန်တော်ကလည်း ပြောတယ်။ ငါမင်းရုပ်ရှင်မင်သား မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောသားပဲ။ မဟုတ်ဘူး သူက ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီ။ ကျွန်တော်က မဟုတ်ဘူး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ပညာသည် ဖြစ်လာတာပါလို့ ပြောလိုက်တဲ့အတွက် သူပြန်ပြီးတော့ အင်းတဲ့ ကြံဖန်ပြီးတော့ ခင်ဗျား လွတ်အောင် ပြောတတ်သားပဲတဲ့။ ဒါလေးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ စကြပါတယ်။ နောက်ပြောချင်တာက သူဟာ အဆိုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သရုပ်သရုပ်ဆောင် ပညာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ သီခြား၊ သူ့ဟန်၊ သူ့မူနဲ့သူ အဲဒီလို ရှိတဲ့ ပညာသည် တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမှာနောက်တခုက အကောင်းနဲ့အဆိုး ဒွန်တွဲထားတာ ရှိတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ အကောင်းက သူ့ကို ဘာပြောပြော သူက ဘာမှ ပြန်ပြီးတော့ မပြောဘူး၊ သူက ပြန်ပြီးတော့ ရင်မဆိုင်ဘူး။ ဒါဟာ အကောင်းလို့ ပြောချင်ပြောပေါ့နော်။ အဆိုးက ဘာပြောပြော သူက နားထောင်ချင်မှ နားထောင်တာ။ ပြန်မပြော နားမထောင်ဆိုတဲ့ သဘောတရားပေါ့ဗျာ။ ဒါဟာ ဇော်ဝမ်းပါပဲ။ ကိုဇော်ဝမ်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုဇော်ဝမ်းဟာ အလွန်ပျော်တတ်တဲ့သူ။ သူ့ဘ၀မှာ အပျော်တွေ အများကြီးနဲ့ သူကြိုက်သလို၊ သူနှစ်သက်သလို၊ သူပျော်သလို နေသွားတယ်။”
ဇော်ဝမ်းရဲ့ အနုပညာ ပါရမီဟာ အဆိုပညာဘက်မှာ ပိုများတယ်လို့ ထင်သလား။ သရုပ်ဆောင်ပညာဘက်မှာ ပိုများတယ်လို့ ထင်သလား။ ဘယ်ဟာ ပိုသာတယ်လို့ ထင်ပါသလဲခင်ဗျ။
“သူက အတူတူလောက်ပဲ။ သူက ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး လုပ်တဲ့သူ။ သူက ရုပ်ရှင်ပညာလည်း သိပ်ဝါသနာပါတာ။ ဆိုတော့လည်း အဲဒီလိုပဲ သူယုံယုံကြည်ကြည် ရဲရဲရင့်ရင့်ပဲ ဆိုပစ်တာပဲ။ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ အမူအယာလုပ်တာတို့၊ သီချင်းဆိုတာတို့ ကျွန်တော် တခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး။ သဘောသကာယ ကောင်းတဲ့သူ။ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ပြောလို့ဆိုလို့ တွဲပြီးတော့ လုပ်လို့ ကောင်းတဲ့ ပညာသည် တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။”
ဇော်ဝမ်းဟာ သူလုပ်နိုင်သလောက် အနုပညာတွေကို အကုန်လုံးလုပ်သွားနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လို့ ပြောလို့ ရမလားခင်ဗျ။
“ကျွန်တော်လည်း သိပါတယ်။ အများလည်း သိပါတယ်။ ဇော်ဝမ်းဟာ သူလုပ်နိုင်တာရဲ့ တ၀က်လောက်ပဲ လုပ်သွားရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေအားလုံးကို ပျော်ပျော်ပါးပါးပဲလုပ်သွားရပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကလည်း သူလုပ်သမျှကို အားလုံး ကျေနပ်ကြတာပါပဲ။”
ဒါရိုက်တာ ၀င်းဖေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Posted by SHWE ZIN U at 5:10 AM0comments Links to this post